11/11/13 ~ Myanmar Forward
Miss Grand International -Swimsuit ပြိုင်ပွဲဓါတ်ပုံများ
Posted by drmyochit Monday, November 11, 2013, under ဓါတ်ပုံများ | No comments
Posted by drmyochit Monday, November 11, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေက ပြောလိုက်ရင်တော့ လေကြီးမိုးကြီးပါဘဲ။ သူတို့ပြည်နယ် ကောင်းစားဖို့ တိုင်းရင်းသားတွေ တန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့၊ စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုပြီး သူတို့လောက် နိုင်ငံနဲ့ဒေသအပေါ်ချစ်တဲ့သူမရှိသလောက် ပြောတတ်ကြပါပေတယ်။ လက်တွေ့ မှာတော့ အရင်က လက်နက်ကိုင် ဗိုလ်ကျချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေက ဖျောက်လို့မရနိုင်သေးဘူး။ လက်နက်အားကိုးနဲ့ ဒေသခံပြည်သူလူထုအပေါ် ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်ချင်တဲ့စိတ်ကို မစွန့်လွှတ်နိုင် သေးဘူး။ ပြည်သူလူထုကို လက်နက်ကိုင်အနိုင်ကျင့်တတ်တာကလွဲပြီး ဘာမှမလုပ်တတ်သေးဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကို အမှန်တကယ်လိုလိုလားလား မရှိကြတာထင်ပါတယ်။
SSA(ရွက်ဆစ်အဖွဲ့)က ကျိုင်းတုံမှာ စစ်ကြောင်းမှူးအဆင့်ရှိတဲ့ စိုင်းခမ်းက စေခိုင်းလို့ မိုင်းတွမ်း၊ မိုင်းခုတ်၊ မိုင်းလုံဒေသမှာရှိတဲ့ တောင်ပေါ် ကျေးရွာတွေမှာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးထားတဲ့ ရွာတွေကို တစ်ရွာလျှင် ဆန် ၁၂ ပုံး၊ ဘတ်ငွေ ၂၀၀၀၀ ဒါမှမဟုတ်ငွေဟောင်းပြား ၁၀၀ ကို SSA(ရွက်ဆစ်အဖွဲ့)သို့ ၂၀၁၃ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအပြီး ပေးသွင်းရမယ်လို့ ၄င်းတို့ရဲ့ အမာခံတွေကတစ်ဆင့် အကြောင်းကြားထားပြီး၊ ပေးသွင်းခြင်းမရှိတဲ့ရွာတွေကို ၄င်းတို့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကိုယ်တိုင် လာကောက်ခံမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက် ထားကြောင်း ဒေသခံတွေဆီက သိရှိရပါတယ်။ SSA(ရွက်ဆစ်အဖွဲ့)ရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့် ဒေသခံရွာသားတွေလည်း ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့လည်း ကြားနေရပါတယ်။
တကယ်တော့ SSA(ရွက်ဆစ်အဖွဲ့)ဟာ ရှမ်းပြည်နယ်ကို ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကို ကိုယ်စားပြုသယောင်ယောင် အသံကောင်းလွှင့်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သာဖြစ်ပါတယ်။ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု တိုက်ဖျက်ရေးကို လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ သတင်းလွှင့်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ မြေပြင်မှာတော့ ၄င်းတို့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ဒေသများနဲ့တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးရေးကို ဦးစီးဆောင်ရွက်ပြီး ဘိန်းစိုက်ခင်းတွေကနေ ဆက်ကြေးကောက်ခံနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်စရိုက်ဆိုးတွေအတိုင်း၊ ဒေသခံပြည်သူလူထုအပေါ် ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်၊ ဆက်ကြေးကောက်၊ လူသစ်စုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသာ အမြဲလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအဖို့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲသွားပါမှ မငြိမ်းချမ်းတဲ့အပြင် ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ နှိပ်စက်မှုကို ပိုပြီးခံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
ခုဆိုရင် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၆ ဖွဲ့ဟာ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေစပြီး ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအမှန်တကယ် လိုလားကြပါရဲ့လား။ တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်ဒေသတွေမှာ ရိုးသားတဲ့ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုအပေါ် ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်ဖို့ ပြည်နယ်တစ်ခု၊ တပ်တစ်တပ်နဲ့ တစ်ဗိုလ်တစ်မင်းနေကြဖို့ဘဲ စိတ်အားထက်သန်နေကြမှာလားဆိုတာကို ဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်သင့်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဲ့ မည်သည့်နေရာမဆို ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်လိုကြတာက တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့ အလိုလားဆုံးဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ဆီ ချီတက်နေကြတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကျ အနိုင်ကျင့်ချင်တဲ့ အပြုအမူတွေကို ဘယ်ပြည်သူလူထုကမှ လက်မခံလိုကြပါဘူး။ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထု တွေ စိတ်အေးချမ်းသာ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားဖို့ တပ်မတော်မှာလည်း တာဝန်ရှိပါတယ်။ တပ်မတော်ရဲ့သဘောထားကိုတော့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုယ်စား နယ်စပ်ဒေသ ၀န်ကြီးက မြစ်ကြီးနားဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြောပြထားပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးရယူရန် အခြေခံမူ ၆ ချက် ချထားပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရယူရန် အမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိရန် သဘောတူစာချုပ်များကို ကတိတည်ရန်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်များကို အမြတ်မထုတ်ရန်။ ဒေသခံများအပေါ်တွင် ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေရန် နိုင်ငံတော်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ တည်ဆဲဥပဒေများကို တိတိကျကျလိုက်နာရန်နဲ့ ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးနဲ့ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်အရ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအရ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရန်တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကလည်း လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန် ရေးထိုးပြီးသည့်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ထပ်လောင်းအတည်ပြုရန်၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးပြီးပါက နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို လုပ်ဆောင်ရန်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံနှင့် အဖွဲ့အစည်းအားလုံးတို့ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန်ဆိုတဲ့ အခြေခံမူကို ချမှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
SSA(ရွက်ဆစ်အဖွဲ့) အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အားလုံး ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ်လိုလားပြီး ကတိက၀တ်များတည်ခဲ့၊ စေတနာမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင် မကြာခင် ငြိမ်းချမ်း သာယာတဲ့ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကြီး ဖြစ်လာမှာပါ။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ဒေသခံများအပေါ် ၀န်ထုတ် ၀န်ပိုးဖြစ်မယ်၊ ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်၊ ဆက်ကြေးကောက်၊ ဘိန်းစိုက်၊ လူသစ်စုစတဲ့အလုပ်တွေကို ဆက်လုပ်နေဦးမယ်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အလှမ်းဝေးနေဦးမှာပါ ။
တည်ကန်ဘောမှ ဂိုးပေး ခဲ့ရခြင်းကို ဝင်းဂါး စိတ်ပျက်နေ
Posted by drmyochit Monday, November 11, 2013, under | No comments
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်နှင့် ပွဲစဉ်တွင် တည်ကန်ဘောမှ ဂိုးပေး လိုက်ရသည့် အခြေအနေ အတွက် စိတ်ပျက်မိကြောင်း အာဆင်နယ် မန်နေဂျာ အာစင်ဝင်းဂါးက ညည်းညူ ပြောဆိုခဲ့သည်။
အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်တွင် ကစားသော ပွဲစဉ်၌ ပွဲချိန်(၂၇)မိနစ်တွင် ဝိန်းရွန်နီက ကန်တင်ပေးသော ထောင့်ကန်ဘောကို ရော်ဘင် ဗန်ပါစီက ခေါင်းတိုက်ကာ ဂိုးသွင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းတစ်ဂိုးတည်းက ပွဲရလဒ် အဆုံးအဖြတ် ဖြစ်ခဲ့သည့်နောက် အဆိုပါ အခြေအနေမျိုးဖြင့် ရှုံးပွဲကြုံရသည်ကို လက်ခံရန် ခက်ခဲလွန်းကြောင်း ပြင်သစ်သား မန်နေဂျာကြီးက ဖွင့်ဟခဲ့သည်။ "တည်ကန်ဘောကနေ ပေးလိုက်ရတဲ့ဂိုးကြောင့် ပွဲတစ်ပွဲကို ကျွန်တော်တို့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ် ဆိုတာက တော်တော့်ကို ကြမ်းတမ်းတဲ့ အခြေအနေပါ" ဟု ဝင်းဂါးက ဆိုသည်။
၎င်းက "ပွဲကြီးပွဲကောင်း တစ်ခုမှာ တည်ကန်ဘောကနေ ဂိုးပေးလိုက်ရပြီဆိုရင် ကွဲပြားတဲ့ အခြေအနေတွေကို ဖြစ်ပေါ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ပထမပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ကစားပုံက အမှားအယွင်း များလွန်းခဲ့တယ်။ ဘောလုံးတွေ အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးခဲ့သလို ပြန်လည်း လိုက်မယူနိုင်ခဲ့ဘူး။ ပေးလိုက်ရတဲ့ဂိုးက အဲဒီလို လက်လွတ်သွားတဲ့ အခြေအနေ တစ်ခုကနေ ခွင့်ပြုခဲ့ရတာပါ"ဟု မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းက " ဒုတိယပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ပုံမှန်ခြေ ပြန်ရလာတယ်။ အခွင့်အလမ်းတွေ ရခဲ့ပေမယ့် လက်တွေ့ အသုံးမချနိုင်ခဲ့ဘူး။ ပွဲရဲ့ အနှစ်သာရကတော့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုနဲ့ သက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် ပထမပိုင်းမှာ သိသာခဲ့တယ် ထင်ပါတယ်"ဟုလည်း ပြောကြားသွားသည်။
အပြောင်းအလဲလုပ်ထားသည့် ဆီးဂိမ်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ပွဲစဉ်ဇယား ပြန်လည်ထုတ်ပြန်
Posted by drmyochit Monday, November 11, 2013, under အားကစားသတင်း | No comments
(၂၇)ကြိမ် မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအ မျိုးသား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အုပ်စု (A)တွင် ဖိလစ်ပိုင်အသင်းပါဝင် ခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့် ပွဲ စဉ်ဇယားပြောင်းလဲရေးဆွဲခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယခုပွဲချိန်ဇယားပြောင်းလဲ ရေးဆွဲရာတွင် အုပ်စုနှစ်ခုစလုံး အတွက် မူလကစီစဉ်ထားသည် ထက်များပြားစွာ ပြောင်းလဲခဲ့ သည်။ အုပ်စုပွဲစဉ်များရေးဆွဲပြီး ထုတ်ပြန်ရာတွင် ဒီဇင်ဘာ၂ရက် ၌ ပွဲစဉ်များစတင်ကစားမည်ဖြစ် ပြီး ယခုနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်မှုတွင် အုပ်စုနှစ်ခုစလုံးမှ ပွဲစဉ်များမှာ ဒီဇင်ဘာရရက်မှစတင်ကာ ယှဉ် ပြိုင်ကစားကြမည်ဖြစ်သည်။
အုပ်စု(ဗ)မှပွဲစဉ်များကို ဖိလစ်ပိုင်အသင်းနှင့် ကစားမည့် အသင်းများ၏ ပွဲစဉ်များကို အ ပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဆီးဂိမ်းအဖွင့်ပွဲစဉ်ကို အုပ်စု(B)မှပွဲစဉ်ဖြင့်စတင်ရန် ပြန်လည်စီ စဉ်ခဲ့သည်။ဆီးဂိမ်းအဖွင့်ပွဲစဉ်အဖြစ် အုပ်စု(B) မှ တီမောနှင့်ထိုင်းအ သင်းတို့ ညနေ၄နာရီတွင် သုဝဏ္ဏ အားကစားကွင်းကြီး၌ စတင်ယှဉ် ပြိုင်မည်ဖြစ်ကာ ဒုတိယပွဲစဉ်အ ဖြစ် အိမ်ရှင်မြန်မာအသင်းနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားတို့က သုဝဏ္ဏကွင်း မှာပင် ည၆နာရီ ၄၅မိနစ်တွင် ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမည်ဖြစ်သည်။
ဆီးဂိမ်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲအုပ် စုပွဲစဉ်များကို ဒီဇင်ဘာ ရရက် မှ ဒီဇင်ဘာ၁ရရက်အထိ ယှဉ် ပြိုင်စေမည်ဖြစ်ကာ ဆီမီးဖိုင်နယ် ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၉ရက် ညနေ၄နာရီ နှင့် ည ရနာရီခွဲတွင် ဇေယျာ သီရိအားကစားကွင်း၌ယှဉ်ပြိုင် ကစားစေမည်ဖြစ်ပြီး တတိယလု ပွဲကို ဇေယျာသိရီအားကစားကွင်း မှာပင် ညနေ ၄ နာရီနှင့် ဗိုလ် လုပွဲကို ဇေယျာသီရိကွင်းမှာပင် ည ရနာရီခွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင်ကစား စေမည်ဖြစ်သည်။
Posted by drmyochit Monday, November 11, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ြ်မန်မာနိုင်ငံသားများ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများ စီးနင်း လိုက်ပါလာသော အဝေးပြေး ယာဉ်တစ်စင်းသည် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်က ဖူးခက်မြို့အဝင် ပတန် (Patong) တောင်ပေါ်၌ တိမ်းမှောက်သွားပြီး မြန်မာ ကျောင်းသားကိုးဦး အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသား ၂၇ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း Phuket Wan ခရီးသွားဌာနတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်ရှိ Asian Institute of Technology (AIT) မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ နှစ်ရာ၏ လေ့လာရေး ခရီးစဉ်ကို အဝေးပြေးယာဉ် လေးစီးဖြင့် ဘန်ကောက်မြို့မှ ထွက်ခွာခဲ့ရာ ပတန် တောင်တက်ခရီးတွင် အရှိန်လွန်ကာ တိမ်းမှောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းတိမ်းမှောက်ခဲ့သော ယာဉ်သည် နောက်ဆုံးယာဉ် ဖြစ်ပြီး ခရီးသည် ၄၀ ကျော် လိုက်ပါလာခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ သတင်းဌာနထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ ယာဉ်တိမ်းမှောက် မှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ကိုးဦး၊ သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံသား ရှစ်ဦး၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား လေးဦး၊ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံသားနှစ်ဦး၊ ထိုင်းနိုင်ငံသား နှစ်ဦး၊ နိုက်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံသား တစ်ဦးနှင့် နီပေါ နိုင်ငံသားတစ်ဦးတို့ ထိခိုက်ခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန်ရရှိသူ ၁၀ ဦးကို ဖူးခက်မြို့ရှိ Bangkok Hospital Phuket သို့ လွှဲပြောင်းထားသည်။
ယင်းဒဏ်ရာ ရရှိသူများတွင် ဦးခေါင်း ထိခိုက်သူ သုံးဦး၊ အတွင်းဒဏ်ရာ ရရှိသူ သုံးဦး ပါဝင်ပြီး ကျန်လူနာများမှာ ခြေထောက် ထိခိုက်မိသူများ ဖြစ်ကြောင်း Phuket Wan သတင်းဌာန ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
“ယာဉ်မောင်းကတော့ ကားကိုပဲ အပြစ်တင်ထားတယ်” ဟု ယင်းခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါလာသော ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
Phuket tour bus plunges off Patong hill, 44 students injured
PHUKET: A tour bus carrying students on holiday from Bangkok plunged off Patong Hill this afternoon after failing to make it up the steep incline.
No deaths were reported in the incident, but 38 students were taken to Patong Hospital while six others were rushed to Bangkok Hospital Phuket in Phuket Town.
“One of the students,aPakistani national, suffered serious head injuries,” said Capt Witaya Sinchumrern of the Patong Police.
More than 20 emergency rescue vehicles sped to the scene at about 2:30pm after receiving reports that the bus had rolled backwards and plunged intoaditch at the base of the east side of Patong Hill.
“There were four tour buses in total, all carrying students from the Asian Institute of Technology in Bangkok,” tour guide Tiwaporn Hongwongpaisarn, 50, told the Phuket Gazette.
“I was on the third bus, but the fourth bus – the one travelling behind us – did not make it up the hill,” she said.
Police have yet to question the driver of the bus, which is marked as belonging to "Tao and Friend Limited Partnership".
“We have yet to locate him and he has not yet presented himself to police,” said Capt Witaya.
သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်မှတ်တမ်း တင် ဓာတ်ပုံများကို ၁၈၆၅ခုနှစ် ဇူလိုင်ရရက်က ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင် အလက်ဇန္ဒားဂါနာဆိုသူက ရိုက် ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်က ကြိုးစင်တစ်ဝိုက်တွင် စစ်သားများ၊ သတင်းထောက်များနှင့် မျက်မြင် သက်သေများစုဝေးနေပုံကို သရုပ် ဖော်ထားသော ထိုဓာတ်ပုံများအား ပထမဆုံးဖိုတို ဂျာနယ်လစ်က နမူ နာများအဖြစ် ထည့်သွင်းထားခဲ့ သည့်ဓာတ်ပုံများလည်း ဖြစ်သည်။
Swann Galleriesလေလံ ရုံတွင် ဓာတ်ပုံလေးပုံအား လေလံ တင်ရောင်းချခဲ့ရာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ၂၀၀၀ဝနှင့် ၃၀၀၀ဝအ ကြား ရရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ထား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပူးပေါင်း လုပ်ကြံရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သူများဖြစ် သည့် လူးဝစ်ပါဝဲလ်၊ ဒေးဗစ်ဟာ ရိုး၊ ဂျော့ဂ်ျအက်ဇာရော့နှင့် မေ ရီဆူရက်တို့ကို ကြိုးပေးရာတွင် ရိုက်ကူးထားသည့် ဓာတ်ပုံများ ဖြစ်ပြီး မေရီဆူရက်သည် အမေ ရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ ကြိုး ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရသော ပထမဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။
သမ္မတလင်ကွန်းကို ပူးပေါင်း လုပ်ကြံရာတွင်ပါဝင်သူ အမျိုး သားခုနစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီးတစ် ဦးအပါအဝင် ရှစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း ပူးပေါင်းလုပ်ကြံရာတွင် ပါဝင်ကျူး လွန်မှုအတိုင်းအတာအရ အက် ဇာရော့၊ ဟာရိုး၊ ပါဝဲလ်နှင့် ဆူရက် တို့ လေးဦးကိုသာ ကြိုးဒဏ်စီရင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကြိုးပေးရာတွင် အနိဋ္ဌာရုံမြင်ကွင်းကို အမိအရ မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးခဲ့သူမှာ စကော့လူမျိုး ဓာတ်ပုံဆရာအ လက်ဇန္ဒားဂါနာဖြစ်ကြောင်း သိ ရသည်။
အမျိုးသမီးများ၏ အသံပါဝင်ခြင်းမရှိလျှင် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ငြိမ်းချမ်းရေးမဖြစ်နိုင်
Posted by drmyochit Monday, November 11, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ြ်မန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်နေသူများအနေဖြင့် ကျားနှင့် မ လူတန်းစားနှစ်ရပ်သာရှိရာ အမျိုးသမီးများ၏ စိုးရမ်ပူပန်မှုများ၊ အသံများပါဝင်ခွင့်မရှိဘဲ၊ ချန်ထားခဲ့ပါလျှင် နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ပြု သောငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆုရှင် Leymah Gboweeက နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်မှ ၁၁ ရက်အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများ စကားဝိုင်း ပထမနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ယခုကဲ့သို့ တိုက်တွန်း ပြောဆိုသွားသည်။
ထိုစကားဝိုင်းကို ပြည်တွင်းမှ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ ကွန်ရက်(WON)၊ Gender And Equality Network၊ Civil Society Forum for Peace ၊ Women’s Refugee Commission နှင့် Columba University တို့ ကပူးပေါင်း၍ ရန်ကုန်မြို့ Sky Star Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ စကားဝိုင်းမစခင် နိုဝင်ဘာ ၉ ရက် ညနေ ၄ နာရီခွဲက လိုင်ဘေးရီးယား၏ အမျိုးသမီးများ ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၊ နိုဗယ်ဆုရှင် LeymahGbowee ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှု အကျဉ်းချုပ်ကို ဖော်ပြထားသည့် “Pray the Devil Back to Hell” ရုပ်ရှင်ကို အဆိုပါ ဟိုတယ်တွင်ပင် ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
“ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်လာဖို့ကို အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ထိုင်စောင့်မနေနဲ့၊ ကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုရမယ်၊ ရှေ့ ထွက်ရမယ်၊ နိုးကြားတက်ကြွရမယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ကျွန်မတို့ကြားမှာတားထားတဲ့ စည်းတွေကို ကျွန်မ တို့ဘာသာ ဖြတ်ကျော်ရမယ်” ဟု နိုဗယ်ဆုရှင် Leymah Gbowee က တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ပဋိပက္ခများဖြစ်ခြင်းသည် နိုင်ငံတစ်ခုကိုပြောင်းလဲရန် အချိန်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်ရေးဆွေးနွေးရာတွင် ပါဝင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ မပြုလုပ်ပါက ငြိမ်း ချမ်းရေးသဘောတူညီချက်များ လတ်မှတ်ထိုးပြီးပါက အမျိုးသမီးများ၏အခန်းကဏ္ဍများမှာ ပျောက်ဆုံး သွားနိုင်ကြောင်းနှင့် အစိုးရအနေဖြင့်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးသည် အမျိုးသမီးများအတွက်လည်း ပါသည်ဆို လျှင်စာရွက်ထဲမှာသာ ပါရှိနေခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊ အမျိုးသမီးများကို ထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် ဥပဒေများ ချမှတ်ပေးရမည့်အပြင်၊ ဥပဒေရှိပြီးရုံဖြင့်လည်း အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အခွင့်အရေးရရှိပြီးဖြစ် သည်ဟု သတ်မှတ်ရန်မသင့်ဘဲ လတ်တွေ့ကျကျထည့်သွင်း စဉ်းစားပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
ထို့အပြင် နိုဗယ်ဆုရှင်က အမျိုးသမီးများအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားနေသူများအနေဖြင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်း၊ ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်မထားသင့်ကြောင်း သူမနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှုများဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
လိုင်ဘေးရီးယန်းနိုင်ငံတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့စဉ်ကအမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အား ပါဝင်ခွင့်ပြုမည်ဟု ယုံကြည်ထားခဲ့ကြကြောင်း၊ အမှန်တကယ် ငြိမ်းချမ်းရေးလတ်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရာတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် ပတ်သက်သော စာတစ်ကြောင်းသာလျှင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ ထိုစကားမှာ အမျိုးသမီးများကို ကလေးငယ်များကဲ့သို့ ဆက်ဆံရမည်ဆိုသောအချက်သာဖြစ်ခဲ့ကြောင်း နိုဗယ်ဆုရှင်က ပြောခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရမှုများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုဗယ်ဆုရှင်က “ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်တယ်ဆိုတာက လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွက်လုပ်နေတာ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ် တာကိစ်္စတွေကို စကားထဲထည့်ပြောနေဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒီဇာတ်လမ်းတွေက ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိနေတယ်။ အီ ရတ်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ လိုင်ဘေးရီးယန်း၊ အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာလည်း ရှိနေတယ်” ဟုဆိုသည်။
အမျိုးသမီးများနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့်ပတ်သက်၍ လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ရာတွင် ရှေ့ထွက်ပြီး တောင်းဆို မှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်းမရှိပါက လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသော လုပ်ရပ်များ သည်အပျော်သဘောဖြင့်လုပ်သော ငြိမ်းချမ်းရေးသာဖြစ်နေနိုင်ကြောင်း၊ မိမိတို့အတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်သော ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ကြောင်းကို ရဲဝံ့စွာတောင်းဆိုကြပါဟု အားပေးစကားပြောခဲ့သည်။
စကားဝိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ အခန်းကဏ္ဍမှ အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၊ နိုင်ငံရေးနှင့် အများပြည်သူများနှင့် ဆိုင် သောကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ပါဝင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ လုံခြုံရေးတွင် အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုမှ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ပဋိပက္ခများ ကာကွယ်တားဆီးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရေး တွင်အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍဆိုသောအချက်များကို အဓိကပြောဆို ဆွေးနွေးကြသည်။
ထို့ပြင်ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်၊ လိင်မှုဆိုင်ရာကာ ကွယ်တာဆီးရေးရှေ့ဆောင်အဖွဲ့အား ပူးတွဲတည်ထောင်သူ၊ ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး အင်ဂျလီနာဂျိုလီကလည်း ယနေ့ပြုလုပ်သော နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများ စကားဝိုင်းသို့ သ၀ဏ်လွှာတစ်စောင် ပေးပို့ခဲ့သည်။
“အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိဘဲ၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှ တိုးတက်နိုင်စွမ်းရှိသလောက် အပြည့်အ၀တိုးတက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု အင်ဂျလီနာဂျိုလီ ကဆိုသည်။
ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင်အမျိုးသမီးများကို ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများတွင် လှုပ်ရှားနေမှုတို့အားမြင်လိုကြောင်း၊ ၎င်းတို့၏ ပါဝင်မှုများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော် အနာဂတ်တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပဋိပက္ခများဖြေရှင်းရာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်း အင်ဂျလီနာကသူမ၏သ၀ဏ်လွှာတွင်လည်း ထည့်သွင်းရေး သားခဲ့သည်။
အရက်မူးနေသည့် ရဲတပ်သားတစ်ဦးနှင့် ပေါင်းသင်းပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀တ်စုံများအား ၀တ်ဆင်ထားသူကို အရေးယူ
Posted by drmyochit Monday, November 11, 2013, under မှုခင်း | No comments
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့နယ်၊ ထောက်ကြံ့ကျေးရွာ၌ ကပြဖျော်ဖြေလျက်ရှိသည့် ရွှေဝေလျှံ ဇာတ်ပွဲခင်းတွင် ရဲတပ်သားဦးသည် အရက်မူးနေပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သူ လူတစ်ယောက်မှလည်း ရဲဝတ်စုံများ ၀တ်ဆင်ထားလျက်ရှိကြောင်း ထောက်ကြံ့ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသိန်းဝင်းမှ သက်ဆိုင်ရာသို့ အတည်ပြုပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ပွဲဈေးခင်း၌ အရက်မူးနေသည့် ရဲတပ်သားမှာ ဇော်မိုးဆိုသူဖြစ်ကြောင်း သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့သည့် ရဲအုပ် ၀င်းထွဋ် ရှိန်နှင့် အဖွဲ့မှ ဆိုသည်။ ထိုသို့သွားရောက်စစ်ဆေးစဉ် ရဲတပ်သား ဇော်မိုးဆိုသူမှာ အရက်သေစာသောက်စားမူးယစ်လျက်ရှိ ပြီး ထိုသူနှင့်အတူလိုက်ပါလာသူ ကိုမင်းဇော်နောင် အသက်(၂၇)နှစ်၊ (ဖခင်အမည်) ဦးဒေါ်လာ နတ်ချောင်းကျေးရွာ၊ ကလေးမြို့နယ်၌ နေထိုင်သူသည် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် မဟုတ်သော်လည်း ရဲဝတ်စုံများအား ၀တ်ဆင်ထားသည်ကို စီစစ်တွေ့ရှိခဲ့ရ သည်ဟု ၎င်း၏မှတ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးမှ အတည်ပြုပြောကြားသည်။
ထို့ကြောင့် ခွင့်ပြုချက်တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ၀တ်စုံအား ၀တ်ဆင်ထားရှိသူ ကိုမင်းဇော်နောင်အား ဥပဒေအရ အရေး ယူဆောင်ရွက်ပေးရန် ဒုရဲအုပ် ဌေးလွင် မှ ယခုလ ၈ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီခွဲချိန်ခန့်က တရားလိုပြုလုပ်၍ ကလေးမြို့မရဲစခန်း၌ တိုင်တန်းခဲ့သဖြင့် ရဲစခန်းက(ပ) ၅၂၁/ ၂၀၁၃ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၁၇၁ အရ အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့ကာလသည် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အသွင်သဏ္ဍန်နှင့် အနှစ်သာရများကိုပါ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ၍ ပြည်သူကို ဗဟိုလ်ပြု သော ရဲလုပ်ငန်းများဖြစ်ပေါ်လာစေရန် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် အချိန်ကာလတွင် ယင်းကဲသို့သော ဖြစ်စဉ် တစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဂုဏ်သိက္ခာအား ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်ကြောင်း မြို့မိ၊ မြို့ဖတစ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့ သည်။
စကားချပ် = နောက်နောင်တွင် ဤကဲသို့သော ဖြစ်စဉ်များ ဘက်စုံမှ ထပ်မံမပေါ်ပေါက်စေရန် သတင်းကျင့်ဝတ်များနှင့်အညီ သဘောရိုးဖြင့် ပညာပေးသတင်းရေသားထုတ်ပြန်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကိုတိုး(ချင်းတွင်း) - Facebook
နယူးဒေလီ၏ တိုးမြင့်လာနေတဲ့ ကိန်းဂဏန်းဆိုးများ
အိန်္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံးပွဲတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒီနှစ်ဒေ၀ါလီမီးထွန်းပွဲတော်မှာ တစ်ညတည်းတင် မီးလောင်မှု ၃၆၅ မှုဖြစ်ခဲ့ပြီး လူတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ မီးလောင်မှု ၂၅၂ မှုနဲ့ယှဉ်ရင် တစ်ရာ ကျော်ကိုတိုးဖြစ်လာတဲ့သဘောပါ။
ဒေ၀ါလီပွဲတော်ဆိုတာ မိသားစုတွေအတွင်းနဲ့ မိတ်ဆွေတွေအချင်းချင်းလက်ဆောင်တွေ အပြန်အလှန် ဖလှယ်ကြ၊ ဆုတောင်းမေတ္တာမွန်တွေပြုကြပြီး လင်္ကာဒီပကိုအောင်နိုင်ခဲ့သူ ရာမမင်းသားတို့ကို မီးပူဇော် ကြိုဆိုကြတဲ့ မင်္ဂလာပွဲတော်တစ်ရပ်ပါ။ ရွှံ့မြေဆီမီးလေးတွေနဲ့ ပူဇော်လေ့ရှိရာကနေ ခေတ်မီလျှပ်စစ်မီး ဆိုင်းအလှတွေအမျိုးမျိုး ဆင်ယင်ပူဇော်ကြသလို မီးရှူးမီးပန်းအမျိုးမျိုး တီထွင်ကစားလာကြပါတယ်။ဗြောက်အိုးတွေဖောက်ပြီး ပျော်ရွှင်မှုကိုဖော်ပြကြရာမှာလည်း သာမန်ဗြောက်အသေးစားလေးတွေကနေ “အာလူးဗုံး” လို့ခေါ်ကြတဲ့အာလူးလောက်ရှိတဲ့ ဗြောက်အိုးကြီးတွေက ကြားရသူနားကွဲမတတ်မြည်သလို အန္တရာယ်လည်းများလှတဲ့ ဗြောက်အိုးအကြီးစားကြီးတွေပါ။ ဒီလို အန္တရာယ်များလှတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ မလုပ်ကြဖို့ နှစ်စဉ်ဒေလီအစိုးရက တားမြစ်ပေမယ့်ဒီမီးရှူးမီးပန်းတွေ၊ ဗြောက်အိုးတွေကြောင့် မီးလောင် မှုတွေ၊ ထခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေသာတိုးလာနေပြီး လေထုညစ်ညမ်းမှုကလည်း အလွန်ဆိုးဆိုးရွားရွားကို ဖြစ်စေလေ့ရှိတာပါ။
“ဒေလီဟာ ရာဇ၀တ်မြို့တော်ကြီးဖြစ်နေပြီလို့ ညည်းတွားသံတွေဟာ နှစ်များစွာကတည်းက ညံလာခဲ့ တာပါ။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေအတွက် အလွန်ကိုမလုံခြုံတဲ့ မြို့တော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။
အိန်္ဒိယနိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်ရဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားချက်အရ နယူးဒေလီမြို့မှာ ဒီနှစ်အတွင်း (အောက် တိုဘာ ၁၅ ရက်အထိ) အဓမ္မပြုကျင့်မှုပေါင်း ၁,၃၃၀ မှု ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ တစ်နှစ် လုံးမှာ ၇၀၆ မှုသာရှိခဲ့တာနဲ့စာရင် နှစ်ဆနီးပါးတိုးပွားလာနေတာ အမျိုးသမီးများအတွက် သွားသတိလာ သတိ ဖြစ်နေပါပြီ။
ဒါ့အပြင် မဟားတရားပြုမှုတွေဟာလည်း ဒီနှစ်အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက် အထိအတွင်းကို ၂,၈၄၄ မှုပါ။ ဒါကို မနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ ၇၂၇ မှုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင်လေးဆနီးနီးကို ကြောက်ခမန်းလိလိအကျူးလွန်အစော် ကားခံနေကြရတာပါ။ ဒါတွေဟာ ရုံးတော်ကိုရောက်လာတဲ့အမှုဖွင့်တိုင်ကြားမှုတွေသာဖြစ်ပြီး မတိုင်ကြား ရဲ /မတိုင်ကြားဖြစ်ခဲ့တဲ့ အလားတူမုဒိမ်းမှုတွေ၊ မဟားဒယားအပြုခံရမှုတွေဟာ အမြောက်အမြားရှိနေမှာ သေချာပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားဒုက္ခသည် အမျိုးသမီးလေးတွေလည်း မလွတ် ကင်းပါဘူး။ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ မိန်းကလေးငယ်တွေ အပါအ၀င် မြန်မာအမျိုးသမီးအရေအတွက် အချို့ဒေသခံတွေရဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းခံရတာတွေရှိသလို မဟားတရားအလုပ်ခံရတာတွေလည်း မနည်း လှတဲ့အရေအတွက်ပါ။
မနှစ်ကဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော်အုပ်စုလိုက် အဓမ္မပြုကျင့်မှုကြီးမှာ မိန်းကလေး ဟာသေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ ကျူးလွန်သူ ခြောက်ဦးအနက်တစ်ဦးက ထောင်ကြီးချုပ်ထဲမှာ မိမိကိုယ် ကိုယ်အဆုံးစီရင်သွားပြီး ကျန်ငါးဦးအနက်လေးဦးကို ကြိုးမိန့်ချလိုက်ပြီးတစ်ဦးကတော့ အသက်မပြေည့် သေးသူဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်ကြည့်အချုပ်သုံးနှစ်သာချလိုက်တဲ့အပေါ် မကျေနပ်မှုတွေလည်းအများ အပြားပါ။
ဒီမှုခင်းဟာ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းကိုတောင်တုန်လှုပ်သွားစေတဲ့ အလွန်စက်ဆုပ်ဖွယ် အုပ်စုလိုက်မုဒိမ်းကျင့်မှုကြီး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာတင်ပဲ ကွယ်လွန်သွားရရှာသူ ဒီမိန်းကလေးရဲ့ဖခင်ကို နိုင်ငံရေးပါတီအများအပြားက လည်း လာရောက်ဆွယ် တရားဟောကြပါသတဲ့။ မကြာခင်ကျင်းပတော့မယ့် ဒေလီလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲမှာသူတို့ပါတီကိုယ်စား အမတ်ဝင်အရွေးခံဖို့ပါ။ သမီးငယ်အတွက် စိတ်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ခံစားနေရဆဲဖြစ်တဲ့ဖခင်ဟာ ဖခင်ပီပီသမီးဒုက္ခကိုပြပြီး ကိုယ်ကျိုးမရှာခဲ့ပါဘူး။ ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ ဆွယ်တရားတွေကို အပြတ်ငြင်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးများကို ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေကလည်း မနှစ်က ၂,၂၁၀ မှုသာရှိခဲ့ရာကနေ ဒီနှစ်ထဲမှာ ၂,၉၀၆ မှု တောင်ရှိနေပြီးပါပြီ။ ဒီအထဲမှာ ၀မ်းမြောက်လောက်အောင် မဟုတ်ပေမယ့် သက်သာရာရလာတဲ့ အစဉ် အလာမှုခင်းတစ်ခုကတော့ သူတို့သမီး (ဇနီး)ထံက သူတို့သား (လင်သား)ကို တင်တောင်းရလေ့ရှိတဲ့ Dowry ကြေးမကျေနပ်လို့ ဇနီးကိုသတ်မှုတွေကတော့ မနှစ်ကနဲ့စာရင်အနည်းငယ် လျော့ကျလာပါ တယ်။ မနှစ်က ဒါဝီကြေးထပ်မပေးလို့ အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အိမ်ရှင်မ ၁၃၄ ယောက်ရှိခဲ့ရာကနေ ဒီနှစ်မှာ ၁၂၃ ယောက်ပဲ ရှိတာကို ပြောတာပါ။
အမျိုးသမီးတွေအခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုပြီး လက်ရှိဒေလီလွှတ်တော်ထဲက အမတ်အမျိုးသမီး သုံးဦးအနက်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ (ကွန်ဂရက်ပါတီက) ဘာခါဆင်းဆိုသူက ဒေလီလွှတ်တော်ထဲမှာ အမျိုးသမီး အမတ်ခွဲတမ်းသုံးပုံတစ်ပုံ (၃၃%) ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေတာလည်း ရှိနေပါတယ်။ သူ့အဆိုအောင်မြင်မယ့် အလားအလာတော့ မတွေ့ရသေးပါဘူး။
တစ်တိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်များရဲ့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာလည်း လူသတ်မှုတွေနဲ့ တရားစွပ် စွဲရင်ဆိုင်နေရဆဲမို့ ဥပဒေပြုသူတွေဟာလည်း ဥပဒေချိုးဖောက်သူတွေဖြစ်နေကြတာ စိတ်မသက်သာ စရာပါ။ ဒီအထဲက အမတ်သုံးယောက်ကိုတော့ လာဘ်စားမှုနဲ့ ပြစ်မှုထင်ရှားလို့ ထောင်ဒဏ်အသီးသီး စီရင်ချမှတ်လိုက်ပြီး သူတို့ကိုနောက်ထပ် ခြောက်နှစ်အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။
အိန်္ဒိယ ဟင်းလျာတိုင်းလိုလိုမှာပါလေ့ရှိတဲ့ ကြက်သွန်နီဈေးဟာပုံမှန် ၂၀ ရူပီးကနေ ၈၀ ရူပီးအထိ ခုန် တက်သွားတာတစ်လကျော်ကြာလှပြီး ခုချိန်ထိပြန်ကျမလာသေးတာဟာလည်း လူထုအတွက်ဒုက္ခများ လှသလိုလက်ရှိအစိုးရအတွက်လည်း မကြာခင်ကျင်းပတော့မယ့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြီးမားတဲ့ စိန် ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပါ။
အမျိုးသား ရာဇ၀တ်မှုမှတ်တမ်း ဗျူရိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရဒေလီမြို့ကြီးဟာ ရာဇ၀တ်မှုဒဏ်အခံရဆုံး မြို့ကြီးလေးမြို့ထဲကတစ်မြို့ အပါအ၀င်ဖြစ်နေပြီး ပြန်ပေးမှု၊ မုဒိမ်းမှု၊ မဟားတရားပြုမှု၊ ဖြားယောင်းမှုနဲ့ လူသတ်မှုလိုဟာမျိုးတွေဟာ ယခင်နှစ်တွေကထက် ပိုလို့သာတိုးလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဒီအစီရင်ခံစာ မှာပဲ ဆက်လက်ဖော်ပြထားတာကတော့ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ ရာဇ၀တ်သား ၄၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အသက် ၁၈ နှစ်ကနေ ၃၀ အကြားအရွယ်တွေ ဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
မဂိုအင်ပါယာနဲ့ ဗြိတိသျှအုပ်စိုးမှုတွေကို ဆက်ခံသယ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ ဒေလီမြို့ကြီးဟာ အိန်္ဒိယရဲ့မြို့တော်ကြီး ဖြစ်နေပြီး ဘာကြောင့်အခုလို ရာဇ၀တ်မြို့ကြီးတစ်မြို့ ဖြစ်နေရသလဲဆိုတာရဲ့အကြောင်းရင်း တွေကတော့ အသေအချာရှိနေမှာပါ။
ဒီလိုတိုးပွားရင်း တိုးပွားလာနေတဲ့ရာဇ၀တ်မှုခင်းတိုင်းအတွက် အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ ရာဇ၀တ်သားတွေတွင်သာ တာဝန်ရှိနေသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေလည်းမေးလာကြပါတယ်။ လတ်တလောမှုခင်းတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် သာမန်အရပ်သားတွေကိုနှိုက်ကိုက ရာဇ၀တ်မှုတွေကို ပြုလွယ်နေတာကို တွေ့နေရပါ တယ်။
၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ မုဒိမ်းမှုကြီးဖြစ်ပြီးနောက် အလားတူမှုခင်းတွေ ပိုမိုပြီးအများအပြား တွေ့လာရတာ ဟာတရားဥပဒေအရေးယူမှု မလုံလောက်တာလား၊ မစိုးမိုးတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် တိုင်တောအမှုဖွင့်ရမယ် ဆိုတဲ့အသိတွေ တိုးပွားမလာလို့လားဆိုတာ စဉ်းစားစရာတော့ ဖြစ်နေပါတယ်။
“Dokha Bon" published by Pan Nu Foundation
Posted by drmyochit Monday, November 11, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
အဝါနုရောင်နှင့် အနက်ရောင် ထန်းလျှော်မျှင်များကို လေးကွက်ကြား ပုံဖော်ကာ ရက်ဖောက်ထားသည့် ပုံးကလေးများကို မကွေးမြသလွန် ဘုရားပွဲ၏ ဒေသထွက် လက်မှုရိုးရာ ဈေးတန်းတွင် အစီအရီ ခင်းကျင်းထားသည်။ ယင်းပုံး အမည်ကို အညာအခေါ်ဖြင့် တိုတိုခေါ်ရလျှင် နားဝင်ဆိုးကောင်း ဆိုးမည်၊ ‘ဖာ’ ဟု ခေါ်သည်။ ထန်းလျှော်မျှင်ဖြင့် ရက်လုပ်ထားသောကြောင့် ထန်းကောက်ဖာ (ဒကောက်ဖာဟု အသံထွက်ပါ) ဟုလည်း အညာတွင် အခေါ်တွင်ကျယ်သည်။
ထန်းကောက်ဖာများကို အညာမြေ ပခုက္ကူမြို့နယ် တစ်ဝိုက်ရှိ ရွာကလေးများတွင် ရက်လုပ်ပြီး နာမည်ကျော် အညာဘုရားပွဲများ ဖြစ်သော မကွေးမြသလွန် ဘုရားပွဲ၊ မင်းဘူး ရွှေစက်တော် ဘုရားပွဲနှင့် စလင်းမြို့ သေခဲလှ ဘုရားပွဲတို့တွင် လိုက်လံ ရောင်းချလေ့ ရှိကြောင်း ထန်းကောက်ဖာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၃၈ နှစ် ရှိပြီဖြစ်သော ဦးပေါက်ကျိုင်းက ရှင်းပြသည်။
“ရှေးတုန်းက မိရိုးဖလာအရ အဝတ်အစားထည့်ရင် ထန်းကောက်ဖာပဲ သုံးတယ်” ဟု ၎င်းက သံသေတ္တာငယ် အရွယ်အစားရှိသော ထန်းကောက်ဖာများကို လက်ညှိုးထိုး ပြောကြားသည်။
ထန်းကောက်ဖာကို အရွယ်အစား သုံးမျိုးဖြင့် ရက်လုပ်ထားပြီး အငယ်ဆုံး ထန်းကောက်ဖာကို ယခင်ခေတ် ကျေးလက် လုံမပျိုများအဖို့ မြတ်နိုးဖွယ်ရာ အလှပြင် ပစ္စည်းများ ထည့်သိမ်းရာတွင် အသုံးပြုလေ့ ရှိသည်။ ကျေးလက် မိတ်ကပ် ဖြစ်သည်။ သနပ်ခါးတုံးငယ်၊ နံ့သာဖြူနှင့် ကရမက် ကဲ့သို့သော အမွှေးနံ့သာခဲများ၏ ပင်ရင်း အမွှေးနံ့ ပျက်ပြယ် မသွားစေရန် ထန်းကောက်ဖာ ငယ်လေးက ရနံ့ထိန်းထားနိုင်သည်။
“ဒါလေးက သူရဲ့ (အမွှေးနံ့သာခဲ) အနံ့အရသာလေးကို ဟာမသွားဘူး (ပျက်ပြယ် မသွားဘူး)” ဟု အသက် ၆၀ အရွယ် ကျေးတောသူ ဒေါ်တင်ငွေက ဆိုသည်။
သံသေတ္တာအရွယ် ထန်းကောက်ဖာကြီး များကိုမူ အဝတ်အစား၊ စောင်နှင့် ခေါင်းအုံးများ ထည့်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။ သူသည်လည်း အဝတ်၏ အမွှေးနံ့ကို ထိန်းထားနိုင်သည်။ ထန်းကောက်ဖာကြီး တစ်လုံးကို ထောင့်ခုနစ်ရာကျပ်၊ အငယ်ကို ငါးရာကျပ်နှင့် အလတ်ဆိုဒ်များကိုမူ ခုနစ်ရာခန့်ဖြင့် ရောင်းချကြောင်း ဦးပေါက်ကျိုင်းက ပြောပြသည်။
ထန်းကောက်ဖာသည် ကျေးလက် မိန်းမပျိုတို့၏ အလှပြင်ပစ္စည်းနှင့် အဝတ်အစားထည့် ပစ္စည်းကိရိယာ တစ်ခုမျှသာ မဟုတ်ပေ။ ထန်းကောက်ဖာ သင်္ကေတသည် အညာသူ အညာသားတို့၏ နှလုံးအိမ်ကိုလည်း နေရာယူထားနိုင်ပြီး ကျေးလက်ယိမ်းများ ကပြဖျော်ဖြေရာတွင် ထန်းကောက်ဖာကို တခုတ်တရ ညွှန်းဆိုစာဖွဲ့ ခဲ့ရသည် အထိပင်။
‘ရွဲကုန်သည် လာပြီဗျ၊ ခင်နှမတို့ ဆင်သဖို့ရာ’ ဆိုသော ရွဲကုန်သည် သီချင်းကို သံတူထပ်ပြီး ‘ဖာ တစ်လုံးမောင် လာပြီဗျ၊ ခင်နှမတို့ ပျော်ရွှင်ဖို့ရာ’ ဟု ဘုရင်ခေတ် ကျေးတောသား တစ်ယောက်ပုံစံ ဝတ်ဆင်ထားသူက ဖာထုပ်ကလေးကို တုတ်လျှိုထမ်းပြီး တောင်ရှည်ကလေး မြှောက်ကာ မြှောက်ကာဖြင့် ဆိုင်းသံမြူးမြူးနှင့်အညီ သီဆိုကပြသော ကျေးလက် ယိမ်းကလေးသည်ပင် အညာသူ အညာသားများ၏ ဟဒယမြူးဖွယ် ဖြစ်ခဲ့သည်။
အညာ သင်္ကေတ ထန်းကောက်ဖာကို ရက်လုပ်ရန် မည်သည့် နိုင်ငံကြီးငယ် အသွယ်သွယ်ကမှ ကုန်ကြမ်း မတင်သွင်းရပေ။ အညာတွင်ပေါက်ပြီး အညာတွင် ကြီးသည့် ထန်းပင်ကြီးများတွင် မလိုအပ်သဖြင့် ခုတ်ချထားသော ထန်းလက်မှ အပေါ်သား ထန်းကြောကို ဓားသွားထက်ထက်ဖြင့် လွှာယူထားသည့် လျှော်ဖြင့် ရက်လုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထန်းလျှော်၏ ပင်ရင်းအရောင်မှာ အဝါနု ဖြစ်သည်။ အဝါနုရောင် တစ်ရောင်တည်းဖြင့် ထန်းကောက်ဖာ ရက်လျှင် အမြင်ရိုးလွန်း လှသဖြင့် မျက်စိပသာဒ ဖြစ်စေရန် ယင်းလျှော်ကိုပင် အနက်ရောင်အဖြစ် ပြောင်းလဲကာ အနက်နှင့် အဝါနု လေးကွက်ကြားဖောက် ရက်လုပ်ကြသည်။
အဝါနုရောင် ထန်းလျှော်ကို အနက်ရောင် ပြောင်းရန်အတွက် သံချေး တက်နေသော သံတုံးသံခဲများကို မီးဖုတ် ထည့်ထားသော ဆန်ဆေးရည်တွင် သုံးညခန့် သိပ်ထားရကြောင်း ဦးပေါက်ကျိုင်းက မိရိုးဖလာ အရောင်ဆိုးနည်းကို ဖောက်သည်ချသည်။
အညာထွက် ကုန်ကြမ်းနှင့် အညာ့နည်း အညာ့ဟန် လက်မှုပညာကို ပေါင်းစပ်ထားသော မျက်စိပသာဒ ဖြစ်ဖွယ် ယင်းထန်းကောက်ဖာကိုပင် ပုဂံသို့ အလည်အပတ် လာသည့် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများက မြန်မာပြန် အမှတ်တရအဖြစ် ဝယ်ယူ သွားတတ်သည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံခြား ခရီးသွားများကို ရောင်းချပါက ဈေးပိုရကြောင်းလည်း ဖြည့်စွက် ပြောကြားသည်။
“ဖာငယ်လေးတွေဆို ထောင့်ငါးရာလောက် ရတယ်။ မြန်မာအချင်းချင်း ရောင်းရင် ဈေးဆစ်တာနဲ့ ဘာနဲ့ ငါးရာလောက်ပဲ ရတယ်” ဟု ဦးပေါက်ကျိုင်းက ဆိုသည်။
အညာဖြစ် မိတ်အင်အညာကို မြန်မာဖြစ် မိတ်အင်မြန်မာ တံဆိပ်ပြောင်းတပ်ပြီး နိုင်ငံခြားသားများ၏ အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်သော လက်မှု ရိုးရာထည်များ အညာတွင် အများအပြား ရှိသည်။ ဂျပန်ဆာမူရိုင်းများ ဆောင်းသည့် ဦးထုပ်နှင့် သဏ္ဌာန်တူသော ဆန်ကောဝိုင်းမှအစ စက်မှုလယ်ယာစနစ် ကျင့်သုံးသော အနောက်နိုင်ငံသားများ အထူးအဆန်း ဖြစ်ဖွယ်ရာ နွားခြူအဆုံး အညာဖြစ် လက်မှုထည်များမှာ မြန်မာများ အာပေါင်အာရင်း ကောင်းကောင်းဖြင့် ညွှန်းနိုင်လျှင် ညွှန်းနိုင်သလောက် တစ်နည်းအားဖြင့် မာကတ်တင်း လုပ်နိုင်သလောက် ဒေါ်လာကို ချူယူနိုင်သော ရိုးရာထည်များ ဖြစ်သည်။
ယင်းကဲ့သို့ လက်မှုရိုးရာထည် အမျိုးမျိုးကို အညာဒေသဖြစ်သော ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ မင်းဘူးမြို့နယ်၊ နတ်မောက်မြို့နယ်နှင့် စလင်းမြို့နယ်တို့ရှိ ကျေးရွာများတွင် ယခုတိုင် လုပ်ဆောင်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယခုလက်ရှိ အခြေအနေတွင်မူ ယင်းလက်မှုရိုးရာ ထည်များကို ဘုရားပွဲများနှင့် မြို့ကြီး အချို့တွင်သာ တင်ပို့ ရောင်းချရပြီး ပလတ်စတစ်ဖြင့် လုပ်သော အိုးခွက်ပန်းကန် ဈေးကွက်နှင့် နှိုင်းစာလျှင် ဈေးကွက်ဝေစု လွန်စွာနည်းပါးကြောင်း လက်မှုရိုးရာထည် ရောင်းချသူများက ဆိုသည်။
အဝတ်အစား ထည့်သိမ်းရန် အတွက် မြန်မာဖြစ် ထန်းကောက်ဖာထက် တရုတ်ဖြစ် ပလတ်စတစ်ပုံး များက အစားဝင် လာသည်။
မြန်မာဖြစ် သင်ဖျာနှင့် ဝါးဖျာနေရာတွင် တရုတ်ဖြစ် ဝါးဆစ်ဖျာက နေရာယူလာသည်။ မြန်မာဖြစ် တံစဉ်နေရာတွင် တရုတ်ဖြစ် တစ်ခါသုံး တံစဉ်များက အစားထိုးလာသည်။ မြန်မာ့ဈေးကွက်တွင် နိုင်ငံခြားဖြစ် ပစ္စည်းများက ဈေးကွက်တွင်ကျယ် နေသည်မှာ တရုတ်ဖြစ် ဝါးဆစ်ဖျာဆိုလျှင် အပူဒဏ် ကို လျှော့ချပြီး အအေးဓာတ်ကို ထိန်းနိုင်သဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ပါသည် ဆိုသော အပြောလေးများ ဖြည့်စွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ တရုတ်ဖြစ် တံစဉ်သည် အသင့်သုံးနိုင်ရန် လက်ကိုင်ရိုး တပ်ထားပြီး မြန်မာဖြစ် တံစဉ်ကဲ့သို့ လက်ကိုင်ရိုး တပ်ရမည့် ဒုက္ခမှ ရှောင်ရှားနိုင်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် မိရိုးဖလာ စီးပွားရေးကို ကုမ္ပဏီပုံစံ ဖွဲ့စည်း လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုသည့် အားသာချက်များ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက နှိုင်းယှဉ် ပြောကြားသည်။
ယခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပြုလုပ်သွားသော မလေးရှား ကုန်စည်ပြပွဲတွင် မလေးရှား မိသားစုတစ်စု၏ နာနတ်သီး ကော်ဖီ ထုတ်လုပ်ခြင်းမှာ အညာလက်မှု ရိုးရာ လုပ်ငန်းလုပ်သူများ အတုယူဖွယ်ပင်။ သဘာဝ နာနတ်သီးဖြင့် ကော်ဖီထုတ်သော မလေးရှား မိသားစုသည် သာမန် မိရိုးဖလာ လုပ်ငန်းလေးကိုပင် ကုမ္ပဏီပုံစံ တာဝန် အဆင့်ဆင့်ကို မိသားစု ဝင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းပြီး တာဝန်ခွဲဝေ ယူကြသည်။
မလေးရှား မိသားစု၏ မိရိုးဖလာ ထုတ်ကုန် နာနတ်သီး ကော်ဖီကို ခေတ်မီ စီးပွားရေး လုပ်ဟန်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ပြီး မြန်မာ ဈေးကွက်သို့ ထိုးဖောက်ရန် ကြိုးစားနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယင်းလုပ်ငန်း ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်၊ မိသားစု ဖခင်ကြီးလည်း ဖြစ်သည့် မလေးရှား အမျိုးသားကြီးက ရှင်းပြဖူးသည်။
အညာ လက်မှုရိုးရာ လုပ်ငန်းရှင်များအဖို့ မလေးရှား မိသားစုကဲ့သို့ မိရိုးဖလာ လုပ်ငန်းကို ခေတ်မီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုသဖွယ် ပြောင်းလဲ မလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမှာလည်း အစိုးရ၏ ကူညီအားပေးခြင်း ကင်းမဲ့မှုနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ကောင်း သက်ဆိုင် ပါလိမ့်မည်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် ကျေးလက်လူထု အများစု ဖြစ်သည့်အပြင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် အလုပ်အကိုင် ပါးရှားမှုကြောင့် နယ်မြေရပ်ခြား တိုင်းတစ်ပါးသို့ အလုပ်သွားလုပ်သူ ခေါင်ခိုက်နေ သည့် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း အညာဒေသတွင် စီမံကိန်းကြီးများ ဖော်ကာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ အတင်းဖန်တီး ပေးခြင်းထက် ရှိရင်းစွဲ မိရိုးဖလာ လုပ်ငန်းလေးများ တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးလာပြီး ငွေကြေး အရင်းအနှီး လွယ်လင့်တကူ ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်သို့ ထိုးဖောက်နိုင်ရန် ပစ္စည်း အရည်အသွေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှု နည်းနာများကို သင်ကြား ပေးခြင်း၊ ဈေးကွက် ရှာဖွေပေးခြင်းတို့ကို အစိုးရက ကူညီလုပ်ဆောင် ပေးသင့်ကြောင်း ဒေသခံများက အကြံပြုသည်။
ယင်းကဲ့သို့ အစိုးရ၏ အားပေးကူညီမှုများသာ ရရှိပါက အညာတွင် လုပ်သော မိတ်အင်အညာ လက်မှု ရိုးရာထည်များသည် မိတ်အင်အညာ သာမက မိတ်အင်မြန်မာ တံဆိပ်တပ်ကာ နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်တွင် အထိုက်အလျောက် နာမည်ယူနိုင်ကြောင်း ၎င်းတို့က သုံးသပ် ပြောကြားသည်။
သို့သော် လက်ရှိအချိန်ထိ ထန်းကောက်ဖာ ကဲ့သို့သော ရိုးရာလက်မှု ထည်များမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတို့၏ လျစ်လျူရှုမှုနှင့် အထင်အမြင်သေးမှု၊ နိုင်ငံခြား ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ဈေးကွက် စိန်ခေါ်မှုတို့ အကြားတွင် မျက်နှာငယ်နေရဆဲ ဖြစ်သည်။ ထန်းကောက်ဖာဆိုလျှင် အဝယ်နည်းလာသဖြင့် ကွယ်ပျောက်ကောင်း ကွယ်ပျောက်သွားနိုင် ပေသည်။ လက်ရှိ အခြေအနေတွင်ပင် မြို့ပြနေလူများမှာ ယင်းလက်မှုရိုးရာထည်ကို စိတ်ဝင်စားမှု လျော့ကျလာသည် ကတော့ အမှန်ပင်။
“တောရွာတွေကပဲ ဝယ်တာ။ မြို့ပေါ်က မဝယ်ဘူး” ဟု ဦးပေါက်ကျိုင်းက ဆိုသည်။
အဝယ်နည်းသည်လည်း မပြောနှင့် ထန်းကောက်ဖာ ဝယ်လာသူကိုပင် ပြုံးစိစိ ကြည့်ကာ ဘာလုပ်ဖို့လဲဟု လှောင်မေး မေးတတ်သော လက်ရှိ အခြေအနေတွင် အညာဒေသရှိ လက်မှုရိုးရာ ထည်များ၏ အနာဂတ်မှာ မိတ်အင်မြန်မာ တံဆိပ်ဖြင့် နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်တွင် ခြေဆန့်ရန် ဝေး၍ မကွေးမြသလွန် ဘုရားပွဲတွင်ပင် အဝါနုနှင့် အနက်ကြား ထန်းကောက်ဖာ လုံးလေးများသည် ဝယ်သူအလာကို စောင့်မျှော်နေဆဲပင်။
Credit>> The Voice
Posted by drmyochit Monday, November 11, 2013, under အနုပညာ | No comments
အချစ်ရေး’ ဆိုတဲ့ ဒုတိယမြောက် တစ်ကိုယ်တော် တေးစီးရီးကို နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် စတင် ဖြန့်ချိတော့မည့် တေးသံရှင် အိမ့်ချစ်နှင့် တွေ့ဆုံ၍ အဆိုပါ တေးစီးရီးအကြောင်း၊ သူရေးသား ထားသော သီချင်းများ အကြောင်းနှင့် လတ်တလော အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုများကို The Voice က မေးမြန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Voice ။ ။ ‘အချစ်ရေး’ စီးရီးကို အိမ့်ချစ် အချိန်ဘယ်လောက်ယူပြီး လုပ်ခဲ့ရလဲ။
EC ။ ။ ဒီစီးရီးကို ညီမ တစ်နှစ်လောက် အချိန်ယူပြီး လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအခွေကို ညီမ ပထမဆုံး စီးရီးဖြစ်တဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေးပုံတူ ဗီစီဒီထွက်ပြီးမှ လုပ်ဖြစ်တာပါ။
Voice ။ ။ စီးရီးထဲမှာ ပါဝင်ရေးသား ပေးထားတဲ့ တေးရေး ဆရာတွေနဲ့ သီချင်း အမျိုးအစားတွေကို ပြောပြပေးပါဦး။
EC ။ ။ ဒီစီးရီးထဲမှာ သီချင်းအားလုံးပေါင်း ၁၂ ပုဒ်ပါပါတယ်။ သီချင်းအမျိုး အစားတွေကတော့ Pop နဲ့ R&B ပုံစံလေးတွေပါ။ တေးရေးဆရာတွေကတော့ နောင်နောင် (Sun Flowers)၊ SP၊ ကျော်ထွဋ်ဆွေ၊ နိုင်းဝမ်း၊ ဘန်နီဖြိုး၊ ရော်ဂျီ၊ သားကြီး၊ သားသား၊ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ ပိုင်ပိုင်၊ Bobby Soxer နဲ့ အိမ့်ချစ်ကိုယ်တိုင် ရေးထားတာ လေးပုဒ်လောက်ပါတယ်။
Voice ။ ။ အိမ့်ချစ် ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ သီချင်းတွေအကြောင်း ပြောပြပေးပါဦး။
EC ။ ။ စီးရီး Title သီချင်း ‘အချစ်ရေး’ ကို အိမ့်ချစ်နဲ့ ဘန်နီဖြိုး ပေါင်းရေးထားတယ်။ အိမ့်ချစ်က သီချင်း အကြောင်းအရာပိုင်းကို စဉ်းစားတယ်။ ဘန်နီဖြိုးက သံစဉ်ပိုင်းကို စဉ်းစားပေးတယ်။ နောက်တစ်ပုဒ်က ညီမရယ်၊ ဖေကြီးရယ်၊ မောင်လေးရယ် သုံးယောက် ဆိုထားတဲ့ ‘တို့ရဲ့ည’ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး။ သားအဖသုံးယောက် ညဘက် အပြင်မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ လည်ပတ်ကြတဲ့ အကြောင်းလေးကို ရေးထားတာပါ။ နောက်ထပ် အပြစ်ရှိသူဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ ဘန်နီဖြိုးနဲ့ စုံတွဲဆိုထားတဲ့ ထပ်တူညီသောဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကိုလည်း အိမ့်ချစ် ရေးထားတယ်။
Voice ။ ။ စီးရီး Title အဖြစ် ‘အချစ်ရေး’ ကို ရွေးဖြစ်တာက ဘာကြောင့်လဲ။
EC ။ ။ အိမ့်ချစ်က ကိုယ့်ရဲ့စီးရီး Title လေးကို လူတွေအရမ်း စိတ်ဝင်စားစေချင်တယ်။ ဘာမှမထူးခြားဘဲနဲ့ ပေးတဲ့ ခေါင်းစဉ်မျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ကြားလိုက်တာနဲ့ လူ စိတ်ဝင်စား စေချင်တယ်။ စီးရီးတစ်ခွေလုံး ပြီးနေပြီ။ စီးရီး Title အတွက် သီချင်းတစ်ပုဒ်ပဲ ချန်ထားတာ။ ခေါင်းစဉ်ကို စဉ်းစားလို့ရမှ ဒီသီချင်းကို ရေးမယ်လို့ နောက်ဆုံး စဉ်းစားရင်းနဲ့ အချစ်ရေးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးကို တွေးမိသွားတယ်။ အိမ့်ချစ်ကိုဆို ရည်းစားရှိတယ်လို့ အသံမကြားဘူးပေါ့။ အချစ်ရေးလေး ပြောပြပေးပါဆိုပြီး ဂျာနယ်တွေက အရမ်းမေးကြတယ်။ သီချင်း အကြောင်းအရာ လေးကလည်း အချစ်ရေးလို့ မေးလာရင် ဘယ်လိုဖြေရမှာလဲ၊ မဖြေတတ်ဘူးပေါ့။ အနုပညာရှင် တော်တော်များများ ဖြေကြသလို အင်းဒီလိုပါပဲဆိုပြီး ပြန်ဖြေတဲ့ ပုံစံမျိုးလေး ရေးထားတယ်။
Voice ။ ။ ဒါကတော့ သီချင်းအဖြစ် ရေးထားတာပေါ့။ လက်တွေ့ဘဝမှာ အိမ့်ချစ်ရဲ့ အချစ်ရေးကရော။
EC ။ ။ မီဒီယာတွေက အိမ့်ချစ်ရဲ့ အချစ်ရေးကို မေးလာခဲ့ရင် ရှိပါတယ်လို့လည်း မဖြေဘူး၊ မရှိပါဘူးလို့လည်း မငြင်းဘူး။ အသက် ၂၃ နှစ်မှာ ရည်းစားမရှိပါဘူးလို့ ပြောရင် ဘယ်သူက ယုံမှာလဲနော်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အတွက် ဘဝလက်တွဲဖော်ဖြစ်ဖို့ မသေချာသေးတဲ့ လူကို စာမျက်နှာတွေ ပေါ်မှာ မဖြေချင်ဘူး။ သေချာတဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ် ရွေးချယ်ပြီးတဲ့ အချိန်မှ အိမ့်ချစ် ဖြေချင်တယ်။
Voice ။ ။ အချစ်ဆိုတဲ့ အရာအပေါ်မှာ အိမ့်ချစ် ခံစားမိသလောက် ပြောပြပေးပါဦး။
EC ။ ။ ညီမဘဝနာခဲ့တဲ့ လူမို့လို့လား မသိဘူး အချစ်ဆိုတာ ဘဝလောက် အရေးမကြီးဘူးလို့ ခံစားရတယ်။ အချစ်ကြောင့် ခံစားရတဲ့ လူတွေကို ညီမအများကြီး တွေ့ဖူးတယ်။ အနီးစပ်ဆုံး ပြရရင်တော့ ကိုယ့်မိဘပေါ့။ အဲဒီလိုတွေ တွေ့နေရတော့ အချစ်ဆိုတာကို သိပ်အယုံအကြည် မရှိချင်ဘူး။ ညီမက နည်းနည်း လက်တွေ့ဆန်တယ်။ အရမ်းစိတ်ကူး ယဉ်တတ်တဲ့ လူငယ်တွေ ထဲမှာတော့ မပါဘူး။
Voice ။ ။ ဒီစီးရီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးချစ်ကောင်းကရော အိမ့်ချစ်ကို ဘယ်လို အကြံဉာဏ်တွေ ပေးသေးလဲ။
EC ။ ။ အနုပညာလောကမှာ ညီမရဲ့ ပထမဆုံး သင်ဆရာက အဖေပါ။ မြင်ဆရာကလည်း အဖေပါပဲ။ အဖေက သူ့ရဲ့ အနုပညာအမွေ လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့လို့ ညီမ ဒီအလုပ်ကို လုပ်ခွင့်ရတာပါ။ အခုချိန်မှာ ညီမကိုသူ Guidelines ပေးသည်ဖြစ်စေ၊ မပေးသည်ဖြစ်စေ မွေးကတည်းက သူ့ကို မြင်လာရတဲ့ ညီမမှာ သူ့ရဲ့အနုပညာ စိတ်ကူးတွေ၊ တီထွင် ဖန်တီးမှုတွေက ပါပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက် အထူးတလည် သင်ပေးစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
Voice ။ ။ အခုဆို ဒုတိယတစ်ကိုယ် တော်စီးရီး ‘အချစ်ရေး’ ကို ဖြန့်ချိနိုင်တော့မယ်။ စီးရီးတစ်ခွေ ထွက်ပြီးတိုင်း အိမ့်ချစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်လို ပြန်သုံးသပ်မိလဲ။
EC ။ ။ ဒီစီးရီးလုပ်တဲ့ အခါမှာတော့ အရင်စီးရီးထက်စာရင် အိမ့်ချစ် အများကြီး အတွေ့အကြုံတွေ ရလာတယ်။ ပိုလုပ်တတ်လာတယ်။ နောက်ပြီး Music အမျိုးအစားအစုံတွေ လျှောက်မထည့်တော့ဘူး။ ညီမနဲ့လိုက်တဲ့ Pop လေးတွေ၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သီချင်းပုံစံလေးတွေပဲ ပါတယ်။ အရမ်းကြီး ပညာပြပြီးဆိုထားတဲ့ သီချင်းမျိုးတွေ မထည့်ထားတော့ဘူး။ ညီမနဲ့ လိုက်တဲ့ Pop လေးတွေ၊ R & B လေးတွေပဲ ထည့်ထားတော့တယ်။
Voice ။ ။ ဒီစီးရီးထဲမှာပါတဲ့ သီချင်းတွေက ဘယ်လို အကြောင်းအရာ တွေကို ရေးဖွဲ့ထားတာလဲ။
EC ။ ။ ဒီစီးရီးမှာ အချစ်ရေးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ လိုက်အောင် အချစ်အကြောင်းတွေ၊ အသည်းကွဲတဲ့ အကြောင်းတွေပါတယ်။ ဘဝအကြောင်းတွေ မပါဘူး။
Voice ။ ။ စီးရီးတစ်ခွေလုံးမှာ အိမ့်ချစ်ကိုယ်တိုင်လည်း အားရပြီး ပရိသတ်လည်း ကြိုက်နိုင်မယ့် သီချင်းက ဘယ်သီချင်း ဖြစ်မလဲ။
EC ။ ။ ညီမအားအရဆုံး သီချင်းကတော့ ‘အချစ်ရေး’ ဆိုတဲ့ သီချင်းပါ။ ဒီသီချင်းရဲ့ စာသားလေးတွေနဲ့ သံစဉ်ကို ညီမ အားရတယ်။ နားထောင်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက်လည်း အမြင်ဆန်းမှာပါ။ ဒီစီးရီးမှာပါတဲ့ သီချင်းတွေအားလုံးက သီချင်းကောင်းကောင်းလေး တွေကို ဖုန်းထဲထည့်ပြီး နားကြပ်နဲ့ နားထောင်ချင်တဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက်တော့ အဆင်ပြေမှာပါ။
Voice ။ ။ ရန်ကုန်မှာလုပ်တဲ့ ရှိုးပွဲ တော်တော်များများမှာ အိမ့်ချစ်ကို တွေ့ရတယ်။ ဒီလိုပွဲတွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မှုပိုင်းကို ထူးခြားအောင် ဘယ်လို ပြင်ဆင်ဖြစ်လဲ။
EC ။ ။ ဒီခေတ်၊ ဒီအခါမှာ အနုပညာ အလုပ်လုပ်တဲ့သူက ကိုယ့်ရဲ့ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မှုပိုင်း အတွက် အရမ်းကြိုးစားလာတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်လည်းသူတို့နဲ့ အပြိုင် လိုက်လုပ်နိုင်မှ တော်ကာကျမယ်။ ပွဲတစ်ပွဲမှာဆိုဖို့ လက်ခံပြီးပြီဆိုရင် ငါဘယ်လို သီချင်းကို ဆိုမလဲ။ ဘယ်လို ဝတ်စားဆင်ယင်မလဲ။ ပရိသတ်ကိုယ့်ကို စိတ်ဝင်စားအောင် ဘယ်လို Performance တွေ လုပ်မလဲ။ ထောင့်စေ့အောင် စဉ်းစားရတယ်။
Voice ။ ။ သီချင်းတွေကို အိမ့်ချစ် ဘယ်အချိန်ကစပြီး ရေးဖြစ်ခဲ့တာလဲ။
EC ။ ။ ညီမ ခုနစ်တန်းလောက်ကစပြီး သီချင်း ရေးဖြစ်တယ်ရှင့်။ စာအုပ်တွေထဲမှာ သီချင်းစာသားတွေ ခိုးခိုးရေးတယ်။ အိမ်ကဆို ရည်းစားစာတွေ မှတ်လို့ အမြဲတမ်း အဆူခံရတယ်။ အဲ့ဒီအရွယ် ကတည်းက ဝါသနာပါတာပါ။ အိမ့်ချစ် ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ သီချင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်လည်း ဆိုဖြစ်သလို သူများတွေကိုလည်း ရောင်းဖြစ်တယ်။ သဇင့်စီးရီးထဲမှာ အိမ့်ချစ်ရေးထားတဲ့ သီချင်းသုံးပုဒ် ပါဖူးတယ်။ ဂျင်းနီကိုလည်း အိမ့်ချစ် ရေးပေးဖူးတယ်။
Voice ။ ။ သီချင်းတွေ ရေးတဲ့အခါ အကြောင်းအရာပိုင်းအတွက် ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ။
EC ။ ။ သီချင်းတွေ ရေးတဲ့အခါ ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုပဲ ဦးတည်ပြီး ရေးမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အကြောင်းတွေပဲ ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။ တေးရေးဆရာ ဦးရွှေဂျော်ဂျော် ပြောဖူးတဲ့ စကားရှိတယ်။ တေးရေးဆရာ ဆိုတာတဲ့ သူများခံစားချက်ကိုလည်း အငှားခံစားပြီး ရေးရတယ်တဲ့။ ညီမ အဲ့ဒီစကားကို လက်ကိုင်ထားပြီး သူများရဲ့ ခံစားချက်ကိုလည်း သူ့နေရာကနေ ဝင်ခံစားပြီး ရေးတယ်။ ကိုယ် ကိုယ်တိုင် ခံစားရတာတွေလည်း ရေးတယ်။ ဒါမှလည်း သီချင်း အကြောင်းအရာစုံ ရေးနိုင်မှာပေါ့။ ကိုယ်က အသည်းကွဲဖူးတယ်ဆိုပြီး ဒါကိုပဲရေးနေရင် အသည်းကွဲ သီချင်းတွေပဲ ဖြစ်နေမယ်။ ကိုယ်ကသိပ်ချစ်မိနေတဲ့ အချိန် ဒါကိုပဲရေးနေရင် အချစ်သီချင်းတွေပဲ ဖြစ်နေမယ်။ အဲဒီတော့ တစ်ခါတလေမှာ တခြားသူတွေရဲ့ဘဝတွေကို ကြည့်ပြီး သူတို့ နေရာကနေ အငှားခံစားပြီး ရေးရတာပေါ့။
Voice ။ ။ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးချစ်ကောင်းက ပွဲထိန်းကောင်းတဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက်လို့ နာမည်ကျော်တယ်လေ။ အိမ့်ချစ် ကိုယ်တိုင်ရော ရှိုးပွဲတွေမှာ ပရိသတ်နဲ့ အပေးအယူမျှဖို့ ဘယ်လိုကြိုးစားလဲ။
EC ။ ။ အဓိကကတော့ အိမ့်ချစ် အဖေ့ကိုကြည့်ပြီး အတုယူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ညီမအဖေ့ခြေရာ မနင်းနိုင်သေးပါဘူး။ အဖေက ပရိသတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ပါရမီ သူ့မှာပါလာတယ်။ စင်ပေါ်မှာ အဖေ ဖျော်ဖြေတာကို ဘယ်နှခါကြည့်ကြည့် အိမ့်ချစ်မရိုးဘူး။ ပရိသတ်က သူစင်ပေါ် တက်လာတဲ့အခါ ဆက်ဆံတဲ့ အမူအရာတွေနဲ့ အပြုံးတွေက တခြားအဆိုတော်တွေကို ဆက်ဆံတာနဲ့ မတူဘူး။ ချစ်ကောင်း စင်ပေါ်တက်ရင် ပျော်ရတယ် ဆိုတဲ့အသိက ပရိသတ်တွေမှာ ရှိတယ်။ အဲ့ဒီလိုပဲ အိမ့်ချစ် စင်ပေါ်တက်ရင်လည်း ပရိသတ်တွေ ပျော်ရတယ် ဆိုတာမျိုး အိမ့်ချစ် ဖြစ်ချင်တယ်။
Voice ။ ။ အိမ့်ချစ်ရဲ့ လတ်တလော အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုလေး ပြောပြပေးပါဦး။
EC ။ ။ အိမ့်ချစ် တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ည မျှော်စင်ကျွန်းမှာ လုပ်မယ့် Hip Hop ရှိုးပွဲမှာ ဆိုဖို့ရှိတယ်။ နယ်ရှိုးတွေလည်း သွားဖို့ရှိတယ်။ စီးရီးတွေကတော့ လူငယ်တွေ အဖွဲ့လိုက် ဆိုထားတဲ့ စီးရီးတွေ ထွက်ဖို့ ရှိတယ်။
Voice ။ ။ ဒီ ‘အချစ်ရေး’ စီးရီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အိမ့်ချစ်ဘက်က ပြောချင်တာတွေ ရှိရင် ပြောပေးပါဦး။
EC ။ ။ ညီမ ပရိသတ်တွေကို အမြဲတမ်း မှန်မှန်ကန်ကန်ပဲ ပေးဆပ်ခဲ့တယ်။ ဒီစီးရီးလေးကိုလည်း ညီမကြိုးစား အားထုတ်မှု အပြည့်အဝနဲ့ လုပ်ထားတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ပရိသတ်ကြီးကလည်း မေတ္တာ အပြည့်အဝထားပြီး အိမ့်ချစ်ကို အားပေးပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ဒီစီးရီးလေးကို နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီမှာ တော်ဝင်စင်တာ အရှေ့မျက်နှာစာမှာ အိမ့်ချစ်နဲ့ ဒီစီးရီးမှာ သီချင်းရေးပေးထားတဲ့ သူတွေ၊ Featuring ဆိုပေးထားတဲ့ သူတွေက အမှတ်တရ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးမယ်။ သီချင်းတွေ ဆိုကြမယ်။
Credit>> The Voice Weekly
လူရည်ချွန် တွေ့ဆုံပွဲ ကော်မတီ အစည်းအဝေးပွဲတွင် ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင် ရွေးချယ်နိုင်ရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်း
ယင်းရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းရခြင်းမှာ ဇန်န၀ါရီ ၅ ရက်တွင် ပြုလုပ်မည့် လူရည်ချွန် ပြန်လည်တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် အတွက်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တွင် ဒေါက်တာသန်းသန်းဆွေ (ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဦးမင်းဆွေ (အတွင်းရေးမှူး)၊ ဒေါ်ညိုညိုခင် (တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး)၊ ဒေါက်တာဦးမောင်မောင်လေး (အထက်မြန်မာပြည်)၊ ဦးတင်လှိုင် (လယ်တွင်းသား စောချစ်) နှင့် ဒေါ်ခင်မြင့်မြင့်တို့ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် အဆိုပြုလွှာများကို ဖြန့်ဖြူးခဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ ကိစ္စနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ လူရည်ချွန် ကွန်ရက်ပုံစံနှင့် လုပ်ထုံးစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းကိစ္စများကို ထပ်မံဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနေ့ အစည်းအဝေးပွဲတွင်ပင် ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင်အဖြစ် အဆိုပြုလွှာ (၃၁) စောင်ကို လက်ခံရရှိပြီး အစည်းအဝေး မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့သော လူရည်ချွန်များ အနေဖြင့်လည်း ယင်းအဆိုပြုလွှာများကို ဒေါက်တာဒေါ်သန်းဆွေ Novel Square Clinic လမ်း ၂၀ နှင့် အနော်ရထာလမ်းထောင့်၊ ဖုန်း ၀၁-၃၇၃၇ ၉၄၊ ၉၅၊ ၉၆၊ ၉၇၊ ၉၈၊ ၉၉ တို့တွင် ရယူနိုင်ပြီး အဆိုပြုလွှာများကို နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်မှစ၍ လက်ခံနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဇန်န၀ါရီ ၅ ရက်တွင် ဖွဲ့စည်းမည့် ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင် ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ဥက္ကဋ္ဌ တစ်ဦး၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌ နှစ်ဦး၊ အတွင်းရေးမှူးတစ်ဦး၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး နှစ်ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး တစ်ဦး၊ တွဲဖက်ဘဏ္ဍာရေးမှူး တစ်ဦး၊ စာရင်းကိုင် တစ်ဦး၊ စာရင်းစစ် တစ်ဦး၊ ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး တစ်ဦး၊ အဖွဲ့ဝင် အရန်နှစ်ဦး၊ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ တစ်ဦး၊ အဖွဲ့ဝင် အရန် နှစ်ဦးနှင့် အမှုဆောင် ၁၁ ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆက်လက်၍ လူရည်ချွန် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ စာရင်းစာအုပ်ပြုစုမှု အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းပြခြင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးစာရင်း အ၀င်အထွက်များကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးကို လူရည်ချွန် ၃၉ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၄-၁၉၈၈ အတွင်း လူရည်ချွန် စီမံကိန်းဖြင့် သတ္တမတန်းမှ တက္ကသိုလ်ကောလိပ် သိပံ္ပများမှ ဘက်စုံထူးချွန်သော ကျောင်းသားကျောင်းသူနှင့် သင်္ချာလူရည်ချွန်များကို တစ်နှစ်လျှင် ၃၀၀ ဦး ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ရွေးချယ်ခံရသည့် လူရည်ချွန်ပေါင်း ၅၁၇၁ ဦးအထိ ရှိခဲ့ကြောင်း လူရည်ချွန်ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီမှ သိရသည်။
ယင်းသို့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဖွဲ့အစည်းရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၁၉၆၄-၈၈ အတွင်း ရွေးချယ်ခံရသော လူရည်ချွန်၊ သင်္ချာလူရည်ချွန်အားလုံး ပြန်လည်စုစည်းရန်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးအတွက် အကျိုးပြုသော ပညာရှင် အင်အားစု (Think Tank) အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Sexy Pose- Model and Actress Moe Yu San
Black Sexy Style- Model Thun Sett
နယ်စပ်လမ်းပိတ်ပြီး ဥပဒေတင်းကြပ် သွားမယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြော
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးက မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင် ပြည်နယ် ဘက်က ၀င်ရောက်လာတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပါလီမန်မှာ မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဒီပူရ် မူနီက နောက်ထပ် လူတွေ မ၀င်ရောက်လာနိုင်အောင် မြန်မာနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ နယ်စပ်ကို ပိတ်ဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရက ဆုံးဖြတ် ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ခုလို ဆုံးဖြတ်ရတာဟာ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကို တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာတဲ့ သူတွေ များပြား လာတဲ့ အတွက် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရ အနေနဲ့ နယ်စပ်ကို ပိတ်ပစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ အပြင် မြန်မာဘက်က တရား မ၀င် ၀င်ရောက်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ကို အကူအညီပေး လက်ခံပြီး အိမ်တွေ ဌားရမ်းတဲ့ သူတွေကိုလည်း အရေးယူသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ခုလို နယ်စပ်ကို ပိတ်မယ်လို့ ပြောဆိုပေမယ့် အခုအချိန် ထိတော့ နှစ်ဘက်နိုင်ငံအကြား ကူးလူး သွားလာမူတွေတော့ ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နယ်စပ်မှာ နေထိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ယူအန် အသိအမှတ်ပြု ဒုက္ခသည် တစ်ဦး ဖြစ်သူ ကိုကျော်သိန်းကို မေးမြန်းကြည့်တော့ နယ်စပ်က ပုံမှန်အတိုင်းဘဲ ရှိနေတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အကြား ရေမိုင် နယ်နမိတ်က မိုင်ပေါင်း ၄၀ ရှိပြီး ကုန်းတွင်း နယ်နမိတ် အရှည်က မိုင်ပေါင်း ၁၃၁ မိုင်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာဘက်ကတော့ တရားမ၀င် ၀င်ထွက်သွားလာနေတာကို တားဆီးနိုင်ရေး အတွက် သူ့နိုင်ငံဘက်ခြမ်းမှာ သံဆူးကြိုး ခြံစည်းရိုးကို ကာရံထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တရားမ၀င် ၀င်ထွက်သွားလာမူတွေကို နိုင်အောင် တားဆီးနိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ထဲကို မြန်မာဘက်က ၀င်ရောက်လာတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ အရေအတွက် တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ များလာတဲ့ အတွက် နိုင်ငံအတွင်းမှာလည်း ၀န်ထုတ် ၀န်ပိုးနဲ့ မတည်ငြိမ်မူတွေ ဖြစ်လာတာကြောင့် အခုအခါမှာတော့ နယ်စပ်ကို ပိတ်ဖို့ အထိ ဘင်္ဂလားဘက်က စီစဉ်လာတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ် ။
Hyundai ထုတ် Veloster Hylighter
Posted by drmyochit Monday, November 11, 2013, under နည်းပညာ | No comments
အင်ဂျင်အရွယ် ၁.၆ လီတာ ရှိပြီး မြင်းကောင်ရေအား ထုတ်လုပ်နိုင်မှုက ၃၇၀ တောင် ရှိပါတယ်။ အဓိက ကတော့ တာဘိုချာဂျာ ၂ လုံးပူး တပ်ဆင်ထားမှုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ LED မီးလုံး တပ်ဆင်မှု ထူးခြားပြီး အမိုးမှာ တပ်ဆင် ထားတဲ့ မီးလုံးကိုလည်း ယခုလို မြင်တွေ့ ရပါတယ်။ တံခါး ၂ ပေါက်ကား ဖြစ်ပေမယ့် လေးယောက်စီး ကား ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဘက် မှာ ကာဂိုခန်း ပါဝင်ပါသေးတယ။်
SEMA ပြပွဲမှာ အဝါရောင်နဲ့ အစိမ်းရင့်ရောင် Hyundai Veloster Hylighter ကို ဝင်ရောက် ပြသထားပြီး လူကြိုက်များခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ပညာရှင် ကို နေရာမှန်ပေးပါ
ဆောင်းပါးရှင် - မောင်တင်ဦး (မြောင်းမြ)
ပညာရှင် (scholar inaparticular branch of knowledge or study, skilled practition) ပညာရပ်တစ်ခု တတ်မြောက်ပြီး အဲဒီပညာရပ်နဲ့ ဘ၀ရပ်တည်ရေးအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုသူဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းဆိုရရင် ပညာရှင်ဟာ မိမိတတ်မြောက်ထားတဲ့ ပညာရပ်ရဲ့ ရပ်ဝန်းမှာ ကျင်လည်ကျက်စား နေထိုင်သူ ဖြစ်ရပါမယ်။ ပညာရပ်နဲ့ ဝေးရာမှာ နေထိုင်ခြင်းဟာ မိမိပညာကို ပစ်ပယ်လိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ကြာလေလေ မိမိတတ်မြောက်ထားတဲ့ ပညာ ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်သလို မိမိရဲ့ ပညာရှင် ဘ၀ကိုပါ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးရဲ့ ဦးတည်ချက်က ပညာရှင် အကြောင်းပဲ ဖြစ်တာကြောင့် အခြားပညာနဲ့ ဆိုင်ရာတွေကို နောင်အလျဉ်းသင့်မှ တင်ပြပါမယ်။
ပညာရှင်ဆိုတာ အခြားနယ်ပယ်များနဲ့ သိပ်မတူလှပါဘူး။ မိမိပညာရပ်ကို လက်တွေ့နယ်ပယ်ထဲမှာ အသုံးချ၊ အသုံးကျအောင် ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ သူ့မှာ ကိုယ်ပိုင်အယူအဆ၊ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ကိုယ်ပိုင်ဟန် ရှိရပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်လို အထက်ကခိုင်းမှ လုပ်တတ်တဲ့သူမျိုး မဖြစ်ရပါဘူး။ အထက်ကို တာဝန်ခံရတာထက် မိမိကိုယ်မိမိ တာဝန်ခံရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ရင်မှန်သလို တိုးတက်ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်သလို မှားရင်လည်း သတ္တိရှိရှိ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး တာဝန်ယူ မဖြေရှင်းနိုင်ရင် မိမိဒီတာဝန်နဲ့ မထိုက်တန်သူအဖြစ် ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံလိုက်ပြီး နုတ်ထွက်သည်အထိ တာဝန်ယူရပါမယ်။ ဒီအပြုအမူဟာ သာမန်လူတို့အတွက် ပညာရှင်တို့ အတုယူ လေးစားစရာ အဆင့်မြင့် အပြုအမူပါ။
ဒီနိုင်ငံမှာ တစ်ပွဲတိုးနည်းနဲ့ အရာရာကို ဖြေရှင်းတတ်ပါတယ်။ လတ်တလော အထက်က လူကြီးတွေ သဘောကျဖို့ လုပ်တတ်တဲ့ အလေ့အထဟာ နိုင်ငံအနှံ့ ပျံ့နှံ့နေပါပြီ။ ဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့ နိုင်ငံတော်ကို ပြီးစလွယ် မတည်ဆောက်ပါနဲ့ ဆောင်းပါးနဲ့ တင်ပြသတိပေးခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီ ဆောင်းပါးရေးပြီး Daily သတင်းစာ၌ ဖော်ပြပြီး တစ်ပတ်အတွင်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦး တက်ရောက်ဖွင့်လှစ် ပေးခဲ့တဲ့ တံတားဟာ ဖွင့်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာ ချဉ်းကပ်လမ်းဘက်က မြေပြိုကျခဲ့တဲ့သတင်း ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
ထို့အတူ ဆောက်ပြီးတိုက်ခန်းတွေ ပြိုကျတဲ့ သတင်းတွေ၊ ကြက်ဆူပင်တွေ စီမံချက်နဲ့ ကျောင်းတွေ၊ ရပ်ကွက်တွေ၊ ရွာတွေမှာ မဖြစ်မနေ စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး ဇီဝလောင်စာ မဖြစ်ဘဲ ချုံပုတ်ဖြစ်သွားတာတွေ၊ ဒါတွေဟာ သုတေသနမရှိ စိတ်ထင်သလို လတ်တလော အဆင်ပြေသလို လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ လုပ်ရပ်ရဲ့ အကျိုးရလဒ်တွေပါပဲ။ အကယ်၍ သုတေသန အားကောင်းတဲ့ နိုင်ငံ၊ သုတေသနကို အလေးအနက်ပြုတဲ့ နိုင်ငံ၊ သုတေသနပြုနေတဲ့ ပညာရှင်ကို နေရာပေး အလေးထားတဲ့ နိုင်ငံသာ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာ၊ လုပ်အားအချိန်တွေ အလဟဿ ဖြစ်စရာ မရှိတော့ပါဘူး။
ကျောင်းတွေမှာလည်း တစ်ပွဲတိုး အလေ့အထဟာ ကျောင်းသားတွေဆီ ကူးစက်နေပါပြီ။ Guide ဆရာမက ဒီလပတ် စာမေးပွဲမှာမေးမယ့် သင်ခန်းစာ အမေးအဖြေကို မနက်ဖြန်ဖြေဖို့ ဒီနေ့မရရအောင် နှုတ်တိုက်ကျက်ခိုင်းပြီး တစ်ပွဲတိုး ဖြေစေပါတယ်။ နားလည်အောင် ဆရာမကလည်း သင်မပေးပါဘူး။ ကလေးကလည်း နားမလည်ချင်ပါဘူး။ စာမေးပွဲ ဖြေနိုင်ဖို့ပဲ အရေးကြီးနေပါတယ်။ စာမေးပွဲဖြေပြီး နောက်တစ်နေ့ ထပ်မေးမကြည့်ပါနဲ့။ ကလေးတွေ ဘာမှမမှတ်မိတော့ပါဘူး။ ဒါကလည်း သုတေသနပိုင်းက အားမရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားမှာ မှာယူတင်သွင်းတဲ့ ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားတွေဟာ ခရီးသည်တွေ ကားပေါ်တက်ရာမှာ ဒူးအကွေး အဆင်ပြေဖို့၊ လက်လှမ်းကိုင်ရာမှာ အဆင်ပြေစေဖို့၊ ထိုင်ခုံတွေ ကျောအဆန့်၊ ခြေအဆန့် အဆင်ပြေစေဖို့ သုတေသန အထပ်ထပ်လုပ်ပြီး ဈေးကွက်မှာ အပြိုင်အဆိုင် ရောင်းချကြတာပါ။
အဲဒီကားတွေ မြန်မာပြည်ထဲ ရောက်လာတော့ ခရီးသည် အဆင်ပြေရေးထက် ကားပိုင်ရှင် ပိုက်ဆံပိုရရေးက ပိုအရေးကြီး သွားပါတယ်။ ခရီးသည် အဆင်းအတက် အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေဖို့ သုတေသန အထပ်ထပ် လုပ်ထားတဲ့ လက်ကိုင်တန်းတွေကို ခရီးသည်က ကိုင်ဆင်းတာကို စပယ်ယာလို့ခေါ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ပညာရှိပီသတဲ့ လေသံနဲ့ "လက်လွှတ်ဆင်းပါ။ လေးဘီးစလုံး ရပ်ထားပါတယ်" တဲ့။ ဒီနိုင်ငံမှာ လူ့တန်ဖိုးက ဟိုးအောက်ဆုံး သုညရဲ့အောက်ကို ရောက်နေတာ ထင်ရှားစေတဲ့ မြင်ကွင်းပါ။
သုတေသန အားနည်းခြင်းက ပညာရှင်များ ထွက်ပေါ်မလာခြင်း၊ ပညာရှင်များအတွက် နေရာပျောက်ခြင်း၊ ပညာရှင်များရဲ့ တွေ့ရှိချက်များ ထွက်ပေါ်မလာခြင်း၊ ဈေးကွက်များ စနစ်တကျ မဖြစ်ထွန်းခြင်း၊ စီမံကိန်းများ မှန်မှန်ကန်ကန် မရေးဆွဲနိုင်ခြင်း၊ ရေရှည်စီမံကိန်းများ ကြိုတင်ရေးဆွဲ မထားနိုင်ခြင်း၊ လတ်တလော ပြဿနာများမှာသာ ပတ်ချာလည်နေခြင်း၊ လတ်တလော ပြဿနာကို လတ်တလောနည်းနဲ့ ဒီကိစ္စကို ပြီးအောင်ရှင်းပြီးမှ ရှင်းလိုက်တဲ့နည်းရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြောင့် နောက်ထပ်နောက်က လိုက်ရှင်းနေရတာ လက်ညှိုးထိုးမလွဲဖြစ်ခဲ့။ ဖြစ်နေဆဲပါ။ ထို့အတူ အနာဂတ် ရည်မှန်းချက်များ မရေမရာ မှေးမှိန်နေပြန်ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်မှ စာသင်ကောင်းတဲ့၊ ဘာသာရပ် နိုင်နင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ ပါမောက္ခ တစ်ယောက်ကို ရာထူးတိုးပေးတဲ့ အနေနဲ့ ပါမောက္ခချုပ်အဖြစ် တိုးမြှင့်ခန့်ထားလိုက်တာဟာ ပညာရှင်ဘ၀ကို ဖျက်ဆီးလိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ အကယ်၍ ရာထူးအတိုးပေး ခံရသူဟာ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာ စိတ်မ၀င်စားဘဲ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိရင် ပညာရှင် ဘ၀လည်းဆုံး၊ အုပ်ချုပ်ရေး အပိုင်းမှာလည်း မအောင်မမြင်နဲ့ နိုင်ငံတော်မှ အဘက်ဘက်မှ ဆုံးရှုံးရပါတယ်။ ဒီလို အဖြစ်အပျက်ပေါင်း များစွာဟာလည်း ဒီနိုင်ငံမှာ ကြုံခဲ့ပေါင်း များလှပါပြီ။
ထို့အတူ ကျောင်းဆရာတစ်ယောက် မူလတန်းမှာဖြစ်ဖြစ်၊ အလယ်တန်းမှာဖြစ်ဖြစ်၊ အထက်တန်းမှာဖြစ်ဖြစ် အတွေ့အကြုံ ကြွယ်ဝလာပြီး သင်ကြားရေးမှာ ထူးချွန်ထက်မြက် လာရုံနဲ့ ရာထူးမတိုးပါဘူး။ မူလတန်းကျောင်းအုပ်၊ အလယ်တန်းကျောင်းအုပ်၊ အထက်တန်းကျောင်းအုပ်၊ ပညာရေးမှူးစတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ပြောင်းမှ ရာထူးတိုးပါတယ်။
စင်စစ် ပညာရှင်တစ်ယောက်ဟာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကောင်း ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါ။ သူကျွမ်းကျင်ရာ နယ်ပယ်ကို သူလွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်လှုပ်ရှားတာဟာ ပညာရှင် အတွက်ရော တိုင်းပြည်အတွက်ပါ အလွန်အကျိုး ရှိစေပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ငန်းဟာ ပညာရှင် လုပ်ငန်းနဲ့ မတူကွဲပြားတာကို အားလုံးလက်ခံ ထားပြီးသားပါ။
ဒါကို သိပါလျက် ပညာရှင်တွေကို ပညာရှင်နေရာမှာ မထားတာဟာ အခြားရည်ရွယ်ချက်များ ရှိနေသလားလို့ အတွေးပွားစရာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၀န်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးပုံဟာ ပညာရှင်များအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ မရှိသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပညာရှင်လို့ အသတ်မှတ် ခံထားရတဲ့ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမတွေဟာ အလုပ်ဝင်ခါစ မူလတန်းဘ၀မှ အသက် ၆၀ ပြည့် ပင်စင်ယူသည်အထိ မူလတန်းပြ ရာထူးနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်သွား ကြတာပါ။
အခြားဌာနတွေမှာ လုပ်သက်နဲ့ ရာထူးတိုးပေးပေမယ့် ပညာရေး ဌာနမှာ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ ဆရာအတတ်သင် လက်မှတ်ရှိမှ ရာထူးတိုးခွင့် ရတာပါ။ ရာထူးတိုးပြီးရင်လည်း သူကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာ (ကျောင်း) မှာ ဆက်တာဝန် ထမ်းဆောင်လို့ မရတော့ပါဘူး။ သူမကျွမ်းကျင်တဲ့ နေရာအသစ်မှာသွား တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါတယ်။
ရာထူးတိုးပေးတာဟာ လစာတိုးရရုံ အဆင့်တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ခံရ ရုံကလွဲပြီး ပညာရပ်ပိုင်းမှာ တိုးတက်မသွားဘဲ ပညာရှင်ခမျာ ရာထူးနဲ့ ထိုက်တန်အောင် အစက ပြန်လေ့လာ ရပြန်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ပညာရှင်များကို ကြာရှည်ထိန်းထား နိုင်ရေးအတွက် ရာထူးတိုးမြှင့်ပုံစနစ် ပြုပြင်ရပါမယ်။ ပညာရှင်ကို ပညာရှင်နေရာမှာပဲထားပြီး ရာထူးတိုးပေး ရပါမယ်။
နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ ကိုယ်တိုင်က အာဏာသုံးရပ်ကို ခွဲဝေအပ်နှင်း ထားပါတယ်။ အစိုးရဆိုတာ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာကို အပ်နှင်းခံထားရတဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြု အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပညာရှင်ကိုနေရာ (ရာထူး)ပေး ခေါ်ခန့်တာဟာ ကောင်းသယောင်နဲ့ အမှတ်မထင် ဆိုးကျိုးကို ဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။ အထက်မှာ ရေးခဲ့သလို ပညာရှင့် ဂုဏ်ရည်ပျက်စီး သွားစေပါတယ်။ ဒါကို ပညာရှင် ကိုယ်တိုင်လည်း သိသလို ပညာရှင်ကို နေရာပေး ခေါ်ခန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် (အဖွဲ့အစည်း) လည်း သိမှာပါ။
ဒါပေမဲ့ အချို့သော ပညာရှင်များက အုပ်ချုပ်သူများကို မလွန်ဆန်နိုင်တာ၊ မလွန်ဆန်ရဲတာ၊ တိုးပေးတဲ့ ရာထူးကို မက်မောတာတွေကြောင့် ပညာရှင်ဘ၀ကို စွန့်လွှတ်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးဘက် ပြောင်းကုန်ကြတာ အများကြီးပါ။ ဒါကို အုပ်ချုပ်ရေးဘက်က ပုဂ္ဂိုလ်များက တွက်ဆပြီး ရာထူးအပြောင်းအရွှေ့ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ပညာရှင်ဘ၀ကို သတ်ပစ်လိုက်တာပါပဲ။
ပညာရှင် စစ်စစ်ဟာ အခွင့်အရေးရတိုင်း မယူပါဘူး။ ဒါကို ယူချင်အောင် ဆွဲဆောင်ပြီး ယူတော့မှ ပညာရှင်လည်း အခွင့်အရေးသမားလို့ သတ်မှတ်ကြပြန်တာပါ။ ပညာရှင်အဖြစ် ရပ်တည်လိုရင် မိမိတတ်မြောက်ထားတဲ့ ပညာအပေါ် သစ္စာရှိရပါမယ်။ ပညာရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပညာရှင်ကို ခြောက်လည်းကြောက်စရာ မလိုပါဘူး။ မြှောက်လည်းမြောက်စရာ မလိုပါဘူး။ မိမိပညာရပ်ကို တိုးတက်အောင် အချိန်တိုင်း သုတေသန ပြုနေရမှာပါ။ သုတေသန တွေ့ရှိချက်များမှ တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင် များစွာဆောင်ရွက် နိုင်ပါတယ်။
သုတေသန လုပ်ငန်းနှင့် ပညာရှင်များ ထွန်းကားပါစေ။
Posted by drmyochit Monday, November 11, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
ငွေကြးချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ဝေးလံခေါင်သီသော နေရာဒေသများတွင် နေထိုင်ရခြင်းကြောင့် ဖြစ်စေ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရရှိရန် ခက်ခဲသော သူများသည် တီဘီရောဂါ ကူးစက်ခံရရန် အခွင့်အရေး များပါသည်။
သွေးချို ရောဂါနှင့် ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ခြင်း
Posted by drmyochit Monday, November 11, 2013, under ကျန်းမာရေးဆောင်းပါး | No comments
သွေးချိုရောဂါသည် ကုသပျောက်ကင်းနိုင်ပါသလား။ သွေးချို ဝေဒနာရှင်အားလုံး သိချင်သောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ကုသမှုကို မှန်မှန်ကန်ကန် ထိထိရောက်ရောက် ခံယူမည်ဆိုပါက သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏ မြင့်တက်မှုသည် ပုံမှန်ပမာဏသို့ ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါသည်။ သို့သော် သွေးချို ရောဂါသည် ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။
သွေးချို ရောဂါခံစားနေရပြီဆိုပါက စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းဖို့မလိုပါ။ သွေးချိုရောဂါ ရှိလျက်နှင့် ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောဘ၀ကို ဖြတ်သန်းနေကြသည့် သွေးချို ရောဂါဝေဒနာရှင်များ သန်းပေါင်းများစွာ ရှိပါသည်။ အစားအသာက်အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ခြင်း၊ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိတိကျကျလိုက်နာခြင်း၊ မပြင်းထန်သော ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများ ပုံမှန်ပြုလုပ်ခြင်းတို့ဖြင့် ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော သွေးချို ရောဂါရှင်ဘ၀ကို တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။
သွေးချိုရောဂါ ဝေဒနာရှင်များအဖို့ အောက်ပါအချက်များကို သတိပြုရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါ အချက်များထဲမှ တစ်ခုခုကို ခံစားနေရပြီဆိုပါက ဆရာဝန်နှင့် ပြန်လည်ပြသသင့်ပါသည်။
သွေးချို ဝေဒနာရှင်များအဖို့ သွေးထဲရှိ သကြားဓာတ်ကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် အစားအသောက် ဆင်ခြင်ခြင်း၊ မပြင်းထန်သော ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခြင်း၊ သွေးထဲရှိ သကြားဓာတ်ကို ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါက အင်ဆူလင်ထိုးခြင်းနှင့် သွေးချိုကျဆေးများ သုံးစွဲခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရပါသည်။
ဝေဒနာရှင်အများစုသည် ၄င်းတို့၏ သွေးတွင်းရှိ သကြားဓာတ်ကို အစားအသောက်ဆင်ခြင်ခြင်း တစ်မျိုးတည်းဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ သွေးထဲရှိ သကြားဓာတ်ကို ထိန်းချုပ်ရန် သောက်ဆေး၊ ထိုးဆေးများ သုံးစွဲနေချိန်၌ပင် အစားအသောက် ဆင်ခြင်ဖို့ လိုပါသည်။ အစားအစာ အမျိုးအစား၊ စားသောက်သည့်အချိန်၊ စားသောက်သည့် ပမာဏ စသည်တို့သည် သွေးတွင်းရှိ သကြားဓာတ်ပမာဏအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။၀ဒ
သွေးချိုရောဂါဝေဒနာရှင်များအဖို့ စားသောက်မည့် အစားအစာအမျိုးအစား ကို စနစ်တကျ ရွေးချယ်၍ ပမာဏအတိအကျ စားသောက်ခြင်း၊ နေ့စဉ်အချိန်မှန်မှန်စားသောက်ခြင်းတို့အပြင် သွေးထဲရှိ သကြားဓာတ်ကို သွေးဖောက်၍ စနစ်တကျတိုင်းတာမှတ်သားရန် လိုအပ်ပါသည်။ သွေးထဲရှိ သကြားဓာတ် ပမာဏကို သိရှိပါမှ ကုသမှုသည် ထိရောက်မှုရှိမရှိကို သိရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
တချို့သော သွေးချိုဆေးများမှာမူ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ပန်ကရိယဟုခေါ်သော မုန့်ချိုအိတ်မှ အင်ဆူလင်ပိုမိုထွက်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းအားဖြင့် ထွက်လာသော အင်ဆူလင်၏အစွမ်းကို အသုံးပြုကာ သွေးထဲရှိ သကြားဓာတ်ကိုလျော့ကျအောင် ပြုလုပ်ပါသည်။ မည်သည့် သွေးချိုဆေး အမျိုးအစား သောက်သုံးသင့်သည်ကို ဆရာဝန်မှ စနစ်တကျ ညွှန်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
အင်ဆူလင်ဓာတ်အကြောင်း အနည်းငယ်တင်ပြလိုပါသည်။ အင်ဆူလင်ဆိုသည်မှာ ဟော်မုန်းဓာတ် တစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ပန်ကရိယဟုခေါ်သော မုန့်ချိုအိတ်မှ အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းဓာတ်ကို ထုတ်လွှတ်ပေးပါသည်။
အင်ဆူလင်ဓာတ်သည် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားရှိ ဆဲလ်များ၏အပြင်နံရံတွင် တွယ်ကပ်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် သွေးထဲရှိ ဂလူးကို့စ်ဓာတ်ကို ၄င်းဆဲလ်များအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်စေရန် လှုံ့ဆော်ပေးပါသည်။
သွေးထဲ၌ သကြားဓာတ်မြင့်တက်ခြင်းသည် ကာလကြာရှည်လာပါက သွေးကြောများအပေါ် အကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိလာပါသည်။ ပန်းသေပန်းညှိုးခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါဝေဒနာများ၊ အမြင်အာရုံရောဂါ ဝေဒနာများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ (နှလုံးရောဂါ၊ လေငန်းရောဂါများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်တက်စေပါသည်။)
အရေပြားပေါ်တွင် အနာများဖြစ်လာနိုင်ပြီး ထိရောက်စွာမကုသနိုင်ပါက ခြေထောက်ဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့ အနာရှိသောနေရာအား ဖြတ်တောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရတတ်ပါသည်။
မလိုင်မပါတဲ့ အဆီထုတ်ထားတဲ့ နွားနို့တစ်ဖန်ခွက်ပြင်ထားပါ။ နွားနို့မနှစ်သက်ရင် ဒိန်ချဉ်သောက်လို့ ရပါတယ်။
Miss Grand International -Swimsuit ပြိုင်ပွဲဓါတ်ပု...
အပြောင်းအလဲလုပ်ထားသည့် ဆီးဂိမ်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ပွ...
အမျိုးသမီးများ၏ အသံပါဝင်ခြင်းမရှိလျှင် နိုင်ငံတကာအ...
အရက်မူးနေသည့် ရဲတပ်သားတစ်ဦးနှင့် ပေါင်းသင်းပြီး ရ...
လူရည်ချွန် တွေ့ဆုံပွဲ ကော်မတီ အစည်းအဝေးပွဲတွင် ဗဟု...
နယ်စပ်လမ်းပိတ်ပြီး ဥပဒေတင်းကြပ် သွားမယ်လို့ ဘင်္ဂလား...
ရန်ကုန်မြို့ရှိ လမ်းမကြီးများပေါ်တွင် အချိန်ကြာမြင်...
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကျရောက်မည့် အာဆီယံ စီးပွားရေးဆိုင်...
အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားအလိုက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ခိုင်...